I-2019 NFL yokuKhangela ngaphandle kwexesha: iiCowboys, uDemarcus Lawrence Vumelana nokuSebenza - I-Nfl
I-2019 NFL yokuKhangela ngaphandle kwexesha
Umkhombe 'S offseason blog bukhoma iya kugcina ukujongana, ukurhweba, ukusika, amarhe, uqikelelo, nayo yonke enye into ekufuneka uyazi ngearhente yasimahla kunye noyilo. Jonga kwakhona malunga neendaba zamva nje ezivela kwiligi zombini ngaphambi kwexesha elibizwa ngokuba ngumthetho (eliqala ngoMvulo, nge-11 Matshi) nasemva kokuba abadlali beqalisile ukusayina (ngolwesiThathu, nge-13 kaMatshi).
Ukuhlaziywa kweChiefs ngokuzikhusela kuyaqhubeka noFrank Clark Trade
Epreli 23, 5:31 pm ET
U-shawn andrews wothukile kwaye udidekile
UJustin Sayles : I-Seattle Seahawks ivumile ukuthengisa isiphelo sokuzikhusela uFrank Clark kwiiNtloko zeSixeko saseKansas ngolwe-Lwesibini ngokutshintshiselana ngokukhetha umjikelo wokuqala kunye nokutshintsha okukhethiweyo kumjikelo wesithathu kuyilo lwalo nyaka kunye nokukhethwa komjikelo wesibini we-2020.
Njengenxalenye yorhwebo, eyaxelwa okokuqala ngu UAdam Schefter we-ESPN , IiChiefs kunye noClark bavumile isivumelwano seminyaka emihlanu, esisigidi seerandi ezingama-105.5 I-63.5 yezigidi iqinisekisiwe . UClark wayezimisele ukufumana i-17.1 yezigidi zeerandi edlala kwithegi ye-franchise kwi-2019, kodwa amandla eSeahawks okumsayina kwisivumelwano sexesha elide kwakunzima kwiveki ephelileyo xa iqela lisayine ikota yasemva uRussell Wilson kwisivumelwano seminyaka emine, sezigidi ezili-140 zeedola- Esona sisityebi kwimbali yeNFL ngonyaka.
USeattle naye ujongene nezigqibo ezizayo malunga nokuzikhusela uJarran Reed, othe wafaka iingxowa ezili-10.5 kwisizini ephelileyo, kunye no-backbacker uBobby Wagner, iqela leqela lokuqala le-All-Pro kunye ne-Seahawk yokugqibela eseleyo kwiLegion ye-Boom era. GM John Schneider uthe kwiveki ephelileyo ukuba iqela ingathathela ingqalelo izibonelelo UClark kwaye walandela ngoMvulo ngokuthi Ukugcina bobathathu abakhuseli kuya kuba nzima kakhulu. Ngelixa uClark isenokuba yiyo Kunzima ukutshintsha , urhwebo lunika khetha-ulambile ulwandle ukhetho lwesibini kuyilo lokuqala lomjikelo ngoLwesine ebusuku (ngoku banama-21 kunye nama-29th).
UClark, ngubani uxelwe ukuba uzobe Inzala evela eIndianapolis Colts naseNew York Jets, sisiqwenga sakutsha nje seChiefs sokuzikhusela. Iqela liqhayisa ngolunye lwezona zenzo zinamandla kwiligi kodwa lagqiba indawo ye-26 Ukuzikhusela kwi-DVOA kwisizini ephelileyo . Ngelixa ukukhawuleza kokuphumelela kweChiefs kuphuculwe kwisiqingatha sesibini se2019 ngasemva kokuphela konyaka wokuphuma kukaDee Ford, ukhuselo alunakumisa i-New England Patriots kwikota yesine kunye nexesha elongezelelweyo lomdlalo wobuntshatsheli we-AFC. Emva kwelahleko, iiNkosi zamgxotha umququzeleli okhuselayo uBob Sutton kwaye uninzi lwabasebenzi, bathengisa iFord kwi-49ers, bahlukana ngeendlela zamatye okwexesha elide u-Justin Houston no-Eric Berry, batyikitya ukhuseleko u-Tyrann Mathieu kunye no-Alex Okafor okhuselayo.
I-6-foot-3, 265-pound Clark, onamaxesha amathathu alinganayo kwiingxowa ezisithoba okanye nangaphezulu, luhlobo lokuphela kokuzikhusela okukhulu komququzeleli omtsha weeNkosi okhuselayo uSteve Spagnuolo. Kodwa ngelixa intshukumo isengqiqweni kwisithuba, kunzima ukudibanisa nentengiso yakwaFord. I-49ers yathumela ukhetho lwango-2020 kumjikelo wesibini kwiiNkosi zeFord ngaphambi kokuba ityikitye isivumelwano seminyaka emihlanu, i- $ 85 yezigidi. kuqinisekiswe kuphela unyaka omnye kunye ne-20.5 yezigidi zeedola . Okwangoku, iiNtloko zayeka izinto ezintathu-kubandakanywa nomjikelo wokuqala-kaClark ngaphambi kokuba atyikitye kwisivumelwano esityebileyo. Kwaye ngelixa bobabini abadlali babeneengxowa ezili-13 ngo-2018 isiseko amanani umboniso loo Ford isenokuba nemveliso ngakumbi.
UClark, ukhetho lwango-2015 lwesibini, wagxothwa eMichigan ngo-2014 emva kokubanjwa kobundlobongela basekhaya e-Ohio ebandakanya intombi yakhe eyayiyintombi yakhe eyathi ekugqibeleni yacengwa kwityala lokuziphatha gwenxa ngaphandle koqhankqalazo oluvela kumphathi wamapolisa walapha . Wayekwabandakanyeka nakwisiganeko sokungena ekhaya ngo-2012 awathi wafumana kuso isilingo.
IChiefs inembali exakayo yakutshanje yabadlali bayo ababandakanyekayo kwiziganeko zodushe lwasekhaya kunye nobundlobongela obujoliswe kwabasetyhini. Ukubuyela umva uKareem Hunt kunqunyulwe ngoNovemba emva koko TMZ Upapashe ividiyo ukumbonisa ukukhaba nokutyhala umfazi kwigumbi lasehotele laseCleveland ngoFebruwari 2018. Abrown batyikitye uHunt kwisivumelwano sonyaka omnye ngoFebruwari, kwaye iNFL yabhengeza kwinyanga ephelileyo ukuba iyakumiswa kwimidlalo yesibhozo yokuqala yexesha le-2019. Isixeko saseKansas sayila i-receiver ebanzi iTyreek Hill ngo-2016 emva kwakhe ulivumile ityala Ukutyholwa ngo-2015 ukuba wagqobhoza waza wakrwitsha intombi yakhe eyayikhulelwe ngoko; Nge-Agasti ka-2018 eso sigwebo sachithwa emva kokuba egqibile ukuvavanywa. Ngo-Matshi , Amapolisa aqinisekisile uphando kwibhetri yolutsha kwikhaya likaHill apho uHill oneminyaka emithathu ubudala uxelwe ukuba waphuka ingalo . Akukho zityholo zifakiweyo.
IiCowboys, uDemarcus Lawrence Vumelana nokwandiswa kweminyaka emihlanu
Epreli 5, 7:40 pm ET
UDanny Heifetz : I-Dallas Cowboys kunye nesiphelo sokuzikhusela u-Demarcus Lawrence bavumile ngemida yolwandiso lwesivumelwano seminyaka emihlanu kunye ne- $ 65 yezigidi eqinisekisiweyo kunye nexabiso eliphezulu le- $ 105 yezigidi, I-NFL Network ka-Ian Rapoport kunye noMike Garafolo ingxelo ngoLwesihlanu. Ngoku ka IGarafolo , Imbuyekezo kaLawrence ngo-2019, ebandakanya ibhonasi yokutyikitya kunye nomvuzo wakhe wexesha lonyaka, iya kuba yeyona mali ikhuselweyo ifunyenwe ngunyaka wokuqala wesivumelwano, idlula i-31 yezigidi zeedola ezafunyanwa nguKhalil Mack kunyaka ophelileyo.
Ukungena kwemali kweCowboys DE DeMarcus Lawrence's-5-year, $ 105 million deal ...
Unyaka 1: $ 31.1 yezigidi
Ngaphezulu kwe-2: $ 48 yezigidi
Ngaphezulu kwe-3: $ 65 yezigidi
-Albert Breer (@AlbertBreer) Nge-5 ka-Epreli 2019
U-Lawrence lelona qela liphumelele ngokukhawuleza kwaye lelinye lawona malungu aphezulu okuzikhusela kwiligi. I-Dallas-franchise-tagged Lawrence kwisizini yesibini elandelelanayo ngo-Matshi, kodwa uLawrence wayethe akafuni kudlala kwenye into yonyaka. Ngoku yena kunye neqela bavumile ukongezwa ngexesha lokuba anike ingxelo kwimisebenzi yexesha laseDallas, eya kuqala ngo-Epreli 15, ngaphandle kwemicimbi yesivumelwano.
Isivumelwano esitsha sikaLawrence okokuqala nje kwee-dominoes ezimbalwa ze-offseason iDallas kuya kufuneka ijongane . Umamkeli u-Amari Cooper ungena kunyaka wokugqibela wesivumelwano sakhe, kwaye ngokujonga ukuba uDallas uthengise ukhetho lokuqala kumhla wokugqibela wonyaka ophelileyo, iqela akunakulindeleka ukuba limyeke kwiarhente yasimahla. Okubaluleke ngakumbi kukuba, kwikota yokugqibela uDak Prescott ungena kunyaka wakhe wokugqibela ( ngehlazo ngexabiso eliphantsi ), kwaye uJerry Jones uthe iqela liya kuqinisekisa ukuhlala kukaPrescott. U-Ezekiel Elliott uphantsi kolawulo lweqela ngamanye amaxesha amabini, kodwa umphathi oyintloko kunye nosekela mongameli olawulayo uStephen Jones Yatsho indibaniselwano ukuba iqela liya kufuna ukumandisa.
Urhwebo lweeBrown uEmmanuel Ogbah kwiiNkosi
Epreli 1, 5:42 pm ET
UHeifetz: AbakwaBrown bathengise isiphelo sokuzikhusela uEmmanuel Ogbah kwiiKings City City ze-E-back for defence back Eric Murray, NFL Network's UIan Rapoport uxele ngoMvulo. Bobabini abadlali babhalwa ngo-2016 kwaye bakunyaka wokugqibela wesivumelwano. UCleveland uthathe u-Ogbah ngokukhetha okokuqala kumjikelo wesibini ngo-2016, kodwa wasilela ukufikelela kulindelo eCleveland. Imveliso yakhe yehle kangangezihlandlo ezithathu ezilandelelanayo, ukusuka kwiingxowa ezi-5.5 njenge-rookie ukuya kwiingxowa ezi-4.0 kwimidlalo eli-10 ngo-2017 ukuya kwiingxowa ezi-3.0 kwimidlalo eli-14 ngo-2018. . Khange abike kwimisebenzi yokuzithandela ngoMvulo elindele ukuba kusetyenzwe ngayo. Umphathi jikelele we-Browns u-John Dorsey wayekhe wadlala indima efanayo e-Kansas City, kwaye u-Murray uyinkosi yamva nje ye-Browns eyongeze emva kokuba etyikitye u-Kareem Hunt ngaphambili kwale sizini.
E-Ogbah, iiNtloko zifumana italente kodwa ingenamveliso yokupasa ngokukhawuleza ukuze ibuye ngexabiso eliphantsi. IiNkosi zikhuphe ipasile u-Justin Houston kwaye wathengisa nge-franchise-tag-Dee Ford ukuya kwi-49ers kwinyanga ephelileyo, ibashiya bengenamda emaphethelweni. Batyikitye ukupasiswa kuka-Alex Okafor kude ne-New Orleans kwaye ngoku bathengise u-Ogbah, kodwa nokokuba ukhuselo lweKansas City luya kufumana imveliso efanayo ekuphumeni kwabo okanye ukubona idrophu ngequbuliso yenye yezona mibuzo zinkulu zexesha le-2019.
Ngokubhekisele kooBrown, kulungile, azizozona ndaba zinkulu zasemva kwemini.
Omnye wethu. @iqosweb pic.twitter.com/ZTcJz2rsAl
-Cleveland Browns (@Browns) Nge-1 ka-Epreli 2019
Ukungasebenzi kakuhle kukaJordani Howard kumdlalo wokuGqibela wamgweba eChicago
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 9: 05 PM KUNYE
UHeifetz: Bala oku njengempumelelo yemiqolo ebalekayo ayinamsebenzi nesihlwele. Iibhere zithengise iJordani Howard kwiiXhalanga ngomjikelo wesithandathu we-2020 ojikelezayo onokuba ngumjikelo wesihlanu we-2020 ngokuxhomekeke ekusebenzeni kwakhe, i-ESPN UAdam Schefter ingxelo ngoLwesine.
I-Howard ibikhona ngokurhweba kangangexesha elithile. Ukhetho lwangaphambili lomjikelo wesihlanu kukunyaka wokugqibela wesivumelwano sakhe se-rookie kwaye imiselwe ukufumana i-2 yezigidi zeedola ngo-2019. Ayinguwo umvuzo othintelayo, kodwa kubonakala ngathi umqeqeshi oyintloko we-Bears uMat Nagy akakhange afumane gumbi kwiqela lakhe umva ongafakwanga galelo kumdlalo odlulayo. U-Howard wayephethe i-250 ephethe i-935 yeeyadi ezibalekayo zeChicago kunyaka ophelileyo (3.7 iiyadi ngokuthwala) kodwa kwamkelwa nje okungama-20 kwiithagethi ezingama-26 zokufumana iiyadi ezili-145 (iiyadi eziyi-7.3 kulwamkelo ngalunye). Ngeli xesha, uTarik Cohen wayenee-99 ezikhawulezayo kwiiyadi ezingama-444 (iiyadi ezi-4.5 ngokuthwala) kwaye wabamba ukupasa okungama-71 kwiithagethi ezingama-91 ezingama-725 zokufumana iiyadi (iiyadi ezili-10.2 ngokwamkela) kunyaka ophelileyo. Ukungakwazi kukaHoward ukufaka igalelo kumdlalo odlulayo kusenokwenzeka ukuba kunciphise ukhetho lweeBhele xa wayesentsimini kwaye kwenza kwaba lula kancinci kukhuselo ukugubungela abanye ababambisi babo. Kwi-5-foot-6, uCohen mncinci kakhulu ukuba angabamba imisebenzi ekhokelayo, kwaye uMike Davis ngoku uyintandokazi yokukhokela iqela ekuthwaleni emva kokushiya uSeattle ukuba atyikitye neeBhele kule nyanga. (Uyilo lweBhele luqokelele-iinombolo 87, 126, 162, 222, kunye nama-238 ngokubanzi-emva korhwebo lukaKhalil Mack.)
EPhiladelphia, uHoward uza kuthatha indawo kaJay Ajayi, owakrazula i-ACL yakhe kulo nyaka uphelileyo kwaye usesearhente yasimahla. U-Howard ujoyina ii-Eagles ezibuyayo ezibaleka uWendell Smallwood, uCorey Clement, noJosh Adams, akukho namnye kubo owazinza ngokwenyani ngo-2018 engekho u-Ajayi. U-Howard akunakulindeleka ukuba abone phantse yonke into njengoko efika eChicago, kwaye unokuba yinto ethandabuzwayo kwibhola ekhatywayo yokwenyani kunye nefantasy ngaphandle kokuba ubetha uSmallwood, uAdams noClement.
Umkhombe Isikhokelo soYilo seNFL sika-2019
Iingxelo ezinzulu zokukhangela, uyilo oluhlekisayo, kunye nohlalutyo ngakumbi oluvela kuDanny Kelly kunye nabanye ababhali bethu beNFL
Urhwebo lweCowboys eDallas kuRobert Quinn
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 28:47 PM KUNYE
UHeifetz: ICowboys ityikitye ipasi rusher kwisivumelwano esitsha, kwaye hayi, ayinguye uDemarcus Lawrence. I-Dallas ithengise ngeeDolphins ipasisa uRobert Quinn, Inethiwekhi yeNFL kaIan Rapoport uxele uLwesine. Le nto ibuyiswa nguMiami ayicacanga, nangona iRapoport ithe inokwenzeka xa kusenziwa umjikelo wokugqibela kuyilo lwexesha elizayo. UQuinn, owayenonyaka omnye kunye ne- $ 12.9 yezigidi yemali engaqinisekiswanga eseleyo kwikhontrakthi yakhe, wavuma isivumelwano sokuhlengahlengiswa neCowboys ngenani elingaziwayo.
UQuinn uya kugcwalisa umngxuma obalulekileyo kwiqela leCowboys ngeli xesha lonyaka. I-linemen ezimbini ezikhuselayo zase-Dallas-uRandy Gregory noDavid Irving- banqunyanyisiwe unaphakade ngenxa yokwaphula imigaqo-nkqubo yeligi yokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi, kwaye akucaci nokuba iyakudlala na ngo-2019. Oko kungashiya uLawrence ophawulwe njengelungelo njengelona kuphela lokudlula Ukuqhubela phambili kuluhlu, nangona engekasayini ithenda yakhe kwaye uthethathethwano ngoku lukhona Indawo ephela ingadluli , utshilo uStephen Jones, unyana kaJerry. Ukucinga ukuba iiCowboys ziyabuyisa uLawrence ngo-2019, nokuba kungokwethegi okanye ngesivumelwano seminyaka emininzi, uya kuba nomntu onokumncedisa kwelinye icala lomgca, kodwa naye umntu abe ekwehla. UQuinn uqokelele iingxowa ze-19.0 ngonyaka wamakhondo ngonyaka we-2013, kodwa uneengxowa ezingama-19.0 kumaxesha amathathu okugqibela edityanisiwe. IiRams zathengisa iQuinn zaya eMiami kulo nyaka uphelileyo zaza zajikeleza umjikelo wesine kunye nomjikelo wesithandathu, kwaye ngoku iiDolphins zinqumle isithiyelo emva kwexesha elinye kusenokwenzeka nokuba zingaphantsi koko. (IiDolphins bezithengela iQuinn nzima kangangokuba bamvumela ukuba atyelele iNew Orleans kunye neDallas kule offseason ngokungathi wayemele umntu wasimahla.) UDallas wayengenayo igumbi lekepusi ukutyikitya ipasile enkulu, okanye ukhetho lokuqala lokuyila enye emva korhwebo lweAmari Cooper, kungoko iQuinn inokuba yeyona ibalaseleyo phakathi kweqela lezinto eziphakamileyo (ezibandakanya ukupasa iarhente yasimahla uZiggy Ansah). UQuinn unetalente ngokwaneleyo yokufumana abalandeli baseDallas bonwabile kwaye bengahambelani ngokwaneleyo ukwenza abalandeli beCowboys bakhungatheke-ngamanye amagama, uya kuba ugqibelele.
UBlake Bortles unokuvavanya imida kaSean McVay's Genius
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 8: 35 PM KUNYE
UHeifetz: Ixesha lokugqibela elibi kwiRams Los Angeles babheja ngokwabo ngokusayina uNdamukong Suh; Ukurhweba ngeBrandin Cooks, uAqib Talib, noMarcus Peters; nokunikezela ngolwandiso olukhulu kuT Todd Gurley kunye noAaron Donald. Kulo nyaka, iiRams zithathe ukungcakaza okukhulu nangakumbi: Batyikitye uBlake Bortles. Owayesakuba ligorha lehlelo iJacksonville Jaguar utyikitye isivumelwano sokugcina ugcino lukaJared Goff eLos Angeles, ngokwe UJeff Darlington we-ESPN .
xa iqela lakho lebhola lisayina uBlake Bortles pic.twitter.com/wSKAi2L5kC
-Riley McAtee (@RileyMcAtee) Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 2019
Isidima sikaSean McVay njengengqondo ekrelekrele ekrelekrele kwiNFL yathatha ukubethwa okukhulu emva kokuba iRams ihlaze iSuper Bowl ilahleko kwiPatriots kwinyanga ephelileyo, kodwa ukuba iBortles ithatha indawo nangasiphi na isizathu, uMcVay unokuphinda aluzuze olo uzuko. I-Bortles yindoda enesiqingatha kunye nesiqingatha se-meme, kwaye yayiza kutywina ilifa likaMcVay ngeepesenti ezili-100 ukuba ujongeka elite ngokungabikho kukaGoff. Le inokuba yeyona nto ishukumayo ngesibindi kodwa ayoyiki ukwenza inkalipho. Yilahleko enkulu kakhulu kubalandeli ababefuna ukubona i-Bortles flail kwi-AAF, kodwa ngummangaliso kwabo bafuna ukuba umsebenzi wakhe weNFL uqhubeke. Ngokukhawuleza, ii-Bortles ezisebenzisa ityala likaMcVay kwimidlalo ye-Rams preseason ziya kuba zibukele umabonwakude. Ukuba uGoff uyasokola kwi-2019 njengoko enzile kwi-Super Bowl, kwaye iiRams azikamsayini kulwandiso ngo-2020, mhlawumbi iBortles iyakuthatha indawo njengoko iiRams ziqala kwikota yangasemva ukuze uMcVay abonakalise kube kanye , phofu, yingqondi.
UFitzmagic Uthatha iitalente zaKhe ukuya eSouth Beach
Ngomhla we-17 kuMatshi, ngo-3: 42 P.M. KUNYE
UHeifetz: Ukusukela oko uRyan Fitzpatrick wanxiba iimpahla zikaDeSean Jackson Kwintlanganiso yakhe yeVeki yesibini yenkomfa yemithombo yeendaba, wabonakala emiselwe iMiami, hayi iTampa Bay.
Indoda yeyure. #GoBucs pic.twitter.com/28OM7KktNc
-Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) NgoSeptemba 16, 2018
NgeCawa laa njongo yaba yinyani. Kwiintsuku ezimbini emva kokuba iiDolphins zithengise uRyan Tannehill kwiTennessee Titans ngolunye uhlobo oluphakathi nolwasekupheleni kwexesha, umphathi jikelele waseMiami uChris Grier wongeze enye yeFitzmagic kwisizini yeDolphins ka-2019. UFitzpatrick uvumile kwisivumelwano seminyaka emibini kunye ne- $ 11 yezigidi kunye nenkuthazo (ngokunokwenzeka esekwe kwintsebenzo kunye nexesha lokudlala) elinokuthatha ikhontrakthi iphezulu njenge- $ 20 yezigidi, ngokwe ESPN's UAdam Schefter .
Emva kokujongana noTannehill, ikota yesibini kuphela kaMiami kuluhlu yayingu-2016 ujikelezo lwesithandathu Jake Rudock kunye no-2018 wesithandathu ujikeleze uLuke Falk. UFitzpatrick angongeza umdlalo wakhe we-roller-coaster quarterback play (kwaye ngethemba lokuqhubeka nesitayile sakhe esifutshane njenge icon yefashoni) kwaye unika iqela ukuba libe bhetyebhetye. Ukuba iidolphins ziyile ikota yango-Epreli, i-Fitz yeyona nto inokulungelwa ukuqala kweVeki yoku-1 enokuthi ibekwe ngokulula phakathi ebudeni bexesha ukuba umntu omtsha ulungile. Ukwanele ngokwaneleyo ukukhokela iMiami kuyo yonke i-2019 ukuba iqela livula ukulinda de uyilo lwango-2020 ukuba lujolise kwi-QB-ekunokwenzeka ukuba lelona nyathelo lilungileyo lokuphinda kwakhiwe umnini weDolphins uStephen Ross othathe ixesha elininzi.
UFitzpatrick akanakubona ukuphakama okufanayo njengoko ebesenza kwisizini ephelileyo: Kwisixhenxe sakhe sokuqala, waphosa iiyadi zesine ezipasa kakhulu kumdlalo ngamnye weligi (295.8) emva koBen Roethlisberger, uPatrick Mahomes II, kunye noMat Ryan. Olo phawu luchanekileyo lomsebenzi weza ngetyala laseTampa elalilungelelaniswe ngumququzeleli owayekhubekisa ngelo xesha uTodd Monken, ngoku oseCleveland. Ukuphindaphinda kokuvuka kukaFitz akunakulindeleka ngokunzulu, ngakumbi ngabadlali abanetalente encinci ehlaselayo eMiami, kodwa ukufika kwakhe kuqinisekisa ukuba iiDolphins azizukukruqula.
IiDolphins ziya konke kuKwakha kwakhona ngokuThengisa uRyan Tannehill kwiiTitans
Ngomhla we-15 kuMatshi 3:50 PM KUNYE
Isixhobo: IiDolphins zaseMiami zinqumle isithiyelo kuRyan Tannehill ngokumthengisa eTennessee Titans, the I-arhente yekota yekota ibhengeze ngolwe-Sihlanu .
URyan Tannehill Urhwebo sisiqalo soKwakha ngokutsha eMiami
IiDolphins ziya kufumana i-2019 ye-7-round pick kunye ne-2020 yesine-rounder kwisivumelwano, kwaye iya kuthumela i-Titans i-2019 yomjikelo wesithandathu, ngokuka UAdam Schefter we-ESPN . Ukuququzelela urhwebo, kuthiwa uTannehill uvumile isivumelwano esenziwe ngokutsha sonyaka omnye.
I-Tannehill, i-30, yathathwa isibhozo sisonke kuyilo luka-2012, kodwa ayizange ivele njengenkwenkwezi kwiminyaka yayo esixhenxe eMiami. Imveliso ye-A & M yaseTexas ayizange yenze iPro Bowl, kwaye ngelixa iphosa ngaphezulu kweeyadi ezingama-4,000 ngo-2014 nango-2015, wazabalaza ukuhlala ebaleni kumaxesha amathathu ukusukela oko. Waliphosa lonke iphulo lika-2017 emva kokukrazula i-ACL edolweni lasekhohlo kuqeqesho lwangaphambi kwexesha lonyaka, kwaye ukwenzakala egxalabeni kwamgcina ngaphandle kwemidlalo emihlanu ngo-2018. Ugqibile isizini ephelileyo ngo-92.7 wokudlula— I-20 kwiligi phakathi kwekota efanelekileyo-njengoko uMiami waphoswa kukudlala okwesithandathu ukusukela oko wajoyina iqela.
Le ntshukumo ibonisa ukuba iMiami ikwimo yokwakha epheleleyo. Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, iqela unayo kukhutshwa ukuya wabulala yamagqala egalelo kwintshukumo yolutsha ebonakalayo phantsi komqeqeshi omtsha oyintloko uBrian Flores. IiDolphins zinokhetho lwe-13th ngokubanzi kuyilo lwentwasahlobo kwaye kusenokwenzeka ukuba abanazo iiasethi zokunyuka baye kuthatha uKyler Murray okanye uDwayne Haskins, ke banokuthi bathambekele kwitanki loku kuwa kukhetho oluphezulu ngo-2020, xa i-Alabama's Tua Tagovailoa kunye ne-Oregon's UJustin Herbert kulindeleke ukuba abekhona.
E-Tennessee, u-Tannehill uzakubuyisela umva u-Marcus Mariota, omnye okhethe umjikelo wokuqala okhe wajamelana nokwenzakala. U-25-oneminyaka ubudala uphulukene nemidlalo emithathu kwi-2018 ngenxa yokwenzakala engqinibeni njengoko i-Titans igqibe i-9-7 kwisizini yesithathu ngokulandelelana. UMariota, oza kudlala kunyaka wakhe wesihlanu kwi-2019, umiselwe ukuba abe yiarhente yasimahla engathintelwanga emva kwalo nyaka.
I-Golden Tate iya kuzama ukugcwalisa i-Odell-Sized Hole eNew York
Ngomhla we-14 kuMatshi 5:41 PM KUNYE
UHeifetz: Iklasikhi Ukwahlukana kwakhona. IiGiants zisayine ii-Eagles zangaphambili, iiLions, kunye ne-Seahawks zokufumana iGolden Tate kwisivumelwano seminyaka emine esixabisa i-23 yezigidi eziqinisekisiweyo kwaye zixabisa iidola ezingama-37.5 ezigidi, i-ESPN UAdam Schefter uxele ngoLwesine. Ukuhamba kuza kwiintsuku nje ezimbini emva kokuba iqela lithengise u-Odell Beckham Jr. ukuya kwiBrowns kumjikelo wokuqala, umjikelo wesithathu, kunye nezokhuseleko uJabrill Peppers. I-Tate ibalasele ebaleni elivulekileyo, yenza i-circus-catch touchdowns, kwaye isenokuba okanye khange ibekho isiphazamiso esikhulu kumagumbi okutshixa adlulileyo. Ngamanye amagama, olona hlobo lusondeleyo lweBeckham iqela elinokulifumana ngexesha leempelaveki.
UTate akasoze agcwalise umngxunya obungakanani be-Odell kwiintliziyo zabalandeli beGiants, nangona engoyena mntu ungoyena mntu ufumanekayo kwibhola ekhatywayo, ebotshelelwe kwindawo ye-17 phakathi kwabo bonke abafumana ngokubanzi kwiiyadi eziphakathi emva kokubanjiswa ngaphezulu, Izibalo zeNFL elandelayo yeGen . Wathengiswa kwi-Eagles esuka kwiiNgonyama kwisizini ephelileyo ngomjikelo wesithathu ngelixa wayenonyaka wokugqibela wesivumelwano seminyaka emihlanu. Akazange enze impembelelo enkulu ePhiladelphia, apho wayenikwe umsebenzi wokufunda incwadi yokudlala kunye nokuphuhlisa i-chemistry kunye noCarson Wentz midseason. UTate ushiye uSeattle ukuba abe nguhayi. 2 emva kukaCalvin Johnson eDetroit. Ngelishwa, ubuchule bakhe obubekwe kweli nqanaba lomsebenzi wakhe ngebabumenza ukuba alungele ecaleni kuka-Beckham.
Ngaphambi kwesivumelwano, iiGiants zazicwangciselwe ukuba zichithe eyona mali incinci kubamkeli ababanzi balo naliphi na iqela kwiligi ngaphandle kwabakwaSteelers, nabo babethengisa ngeenkwenkwezi zabo. Kodwa loo mali ihlawula kuphela ukuhamba kwemali, kunye ne-Giants 'yezigidi ezili-16 zeedola kwi-Beckham ngeli xesha lonyaka njengoko edlalela amaBrown ngokuqinisekileyo ziya kuba ngaphezulu komfanekiso weTate cap kule sizini. UTate unokuba ngumdlali olungileyo kwiiGiants, kodwa njengayo nayiphi na into ebuyayo, uyakuhlala eyisikhumbuzo somntu amtshintshileyo.
UBlake Bortles ayisiyakho eyokukhaba malunga naLiphi na ixesha elide
Matshi 13, 9:05 PM KUNYE
UHeifetz: UBlake Bortles akasenguye iJaguar. UJacksonville umkhulule ngoLwesithathu, umhla wokuqala weligi, iqela labhengeza kuTwitter.
Sikhuphe iQB Blake Bortles. pic.twitter.com/8sbzNYkxMS
- #DUUUVAL (@Jaguars) Ngomhla we-14 kuMatshi 2019
I-Bortles iya kutshintshwa nguNick Foles, kwaye akucaci ukuba uphi (okanye nokuba) uya kufumana elinye ithuba leNFL. IiJaguar zibonakala ngathi zinokuba zikulungele ukuqhubela phambili zisuka eBortles e2018, kodwa ukwenzakala kwesihlahla kubangele isiqinisekiso sokulimala kumvuzo wakhe wezigidi ezili-19. Iqela liphendule ngokukrazula loo nto kwaye lamsayina kwiminyaka emithathu, i-54 yezigidi zeedola ezinciphise i-2018 cap ukuya kwi-10 yezigidi. Ngenxa yeso sivumelwano, iqela liya kutya i-16.5 yezigidi zeedola kwimali efileyo esele ihlawulwe kuye eya kuthi ibale ngokuchasene ne-cap ngeli xesha lonyaka. UFoles uxelwe ukuba uza kwenza i-22 yezigidi zeedola ukukhokela iqela kulo nyaka.
Ngelixa iiJaguar zinokuthi zithathe indawo yeBortles njengekota ebuyayo, i-intanethi ayinakuze ithathe indawo yomngxunya wobungakanani be-Bortles oshiyekileyo kwiihlaya zethu ze-Twitter. Wayengekho kwikota elungileyo, kodwa wayengumdlalo obalaseleyo malunga nokuba ngumhlali ophilayo.
U-Eric Berry akasekho kwiNtloko yesiXeko saseKansas
Ngomhla wamashumi amathathu anesithathu ku-Matshi 13:20 PM KUNYE
Isixhobo: IiChiefs zikhulule izihlandlo ezintlanu iPro Bowler u-Eric Berry, we-ESPN UAdam Schefter uxele ngoLwesithathu .
Ukhuseleko oluneminyaka engama-30 luye lwacinywa ngaphambi kokuba umvuzo wakhe osisi-7.25 sezigidi ze-2019 uqinisekiswe ngokupheleleyo ngoLwesihlanu, utshilo uSchefter. Wayesandula ukugqiba unyaka wesibini weminyaka emithandathu, ikhontrakthi yezigidi ezingama-78 zeedola eyamhlawula i-30 yezigidi zeedola.
UBerry ngowokugqibela umkhuseli weKansas City ukuba athunyelwe ngaphandle kwedolophu kule offseason. NgoLwesibini, iiNkosi zathengisa nge-franchise-tagged backbacker u-Dee Ford ukuya kuma-49ers, kwaye kwiintsuku nje ezimbini ngaphambi koko, bakhupha u-Pro Bowler u-Justin Houston. Ukuhamba kulandela ixesha apho ulwaphulo-mthetho lwaseKansas City lukhokele iligi kuzo zombini iiyadi kunye namanqaku ngomdlalo ngamnye kodwa ugqibe i-26th kwi-DVOA yokuzikhusela . IChiefs yaphulukana nomdlalo wobuntshatsheli we-AFC emva kokusilela ukumisa iiPatriots kuhambo lokuqala lwexesha elongezelelekileyo, kunye nomnxibelelanisi uBob Sutton kunye nabasebenzi abaninzi abazikhuselayo bagxothwa kungekudala emva koko.
Kukhethwe isihlanu ngokubanzi kuyilo luka-2010, uBerry wayengomnye wabadlali abadumileyo beKansas City kule minyaka ilishumi. Wayeyinkwenkwezi ebaleni, efumana iqela lokuqala I-All-Pro iwongwa izihlandlo ezithathu, kwaye woyisa ubunzima kuyo. Emva kwexesha le-2014, wafunyaniswa ukuba une-lymphoma kaHodgkin, kodwa wakwazi ukubuya aqale imidlalo eli-15 kunyaka olandelayo. Nangona kunjalo, amaxesha akhe amabini okugqibela aphele ngaphambi kwexesha ngendlela ebuhlungu: Wayikrazula i-ACL yakhe ngeVeki yoku-1 yesizini ka-2017, kwaye ukulimala kwesithende kwamlahlekisela yonke ngaphandle kwemidlalo emibini ngo-2018. Ngaphandle kwempumelelo yeChiefs yakutshanje, uvele nje imidlalo emithathu yokudlala, yonke ilahleko.
Isixeko saseKansas asizukuhlala singenalo igama elibonakalayo kwindawo yezokhuseleko, nangona kunjalo: Iqela lavuma isivumelwano seminyaka emithathu esixabisa i $ 42 yezigidi kunye noTyrann Mathieu ngoMvulo. Ukusukela uMathieu, uLandon Collins, u-Earl Thomas, u-Adrian Amos, kunye noLamarcus Joyner bonke bafikelela kwizivumelwano namaqela ngaphambi kokuvulwa kwe-arhente yasimahla ngoLwesithathu, uBerry uya kuba lelona gama likhulu kwintengiso. Umbuzo uza kuba ngowokuba amaqela azakumnika isivumelwano ngokufana noko kwafunyanwa ngabo badlali ngokunikwa kwimbali yakhe yokulimala kutshanje.
U-Earl Thomas kunye noMark Ingram zezona ndawo zintsha zeBaltimore Ravens
Ngomhla we-13 kuMatshi, ngo-1: 21 P.M. KUNYE
UHeifetz: AmaRavens abhabhela phezulu. U-Earl Thomas uzimisele ukutyikitya iminyaka emine, iidola ezingama-55 yezigidi ngezigidi ezingama-32 zeedola aqinisekiswe ngokupheleleyo yiBaltimore Ravens, i-ESPN UAdam Schefter ixelwe. Ngaphantsi kwemizuzu eli-15 emva kokuqhekeka kweendaba zikaTomas, uSchefter kunye nogxa wakhe UDianna Russini uxele ukuba isicwangciso seRavens sokutyikitya eyayisakuba yiNew Orleans ibuyela umva uMark Ingram kwisivumelwano seminyaka emithathu esinenani eliqinisekisiweyo elingabizi mali ezixabisa i-15 yezigidi zeedola.
I-Ravens ikhuphe ukhuseleko u-Eric Weddle kwiveki ephelileyo ngaphandle kwegalelo lakhe kwi-playoffs yaseBaltimore. Ukuhamba kuyavakala ngoku kuba iRavens inoTomas, olona khuseleko lubalaseleyo lwama-2010. Ukuhamba kuza kwinyanga enye emva kweBaltimore enkulu u-Ed Reed, okhuseleko olungcono lwama-2000s, kwathiwa igama kulo nyaka kwiPro Football Hall of Fame class. Isakhono sikaTomas sitshata isantya sokusebenza esinqabileyo sokuchonga imidlalo ngesantya somzimba esimnika uluhlu olungaqhelekanga ebaleni. Uya kugqiba iminyaka engama-30 ngoMeyi kwaye uza nomlenze owaphukileyo ophelise ixesha lakhe le-2018 noSeattle, kodwa ukuba ukufuphi nomdlali ngexesha wayesempilweni kunyaka ophelileyo, uya kubuyela kwelona likhuseleko lihle kwiligi. . Kumdlalo opheleleyo wokugqibela kaThomas, wabamba ikota yeCowboys uDak Prescott kabini, kubandakanya enye eyatywinela uloyiso lweSeahawks.
UThomas udume wathi kumqeqeshi oyintloko weCowboys uJason Garrett emva komdlalo wabo ngeKrisimesi ngo-2017 ukuba ukuba wayekhe wamshiya uSeattle wayefuna iDallas, iqela alithandayo, ukuba limfumane. Kodwa iiCowboys zazinethemba lokuba banokutyikitya uTomas ngesaphulelo sedolophu, ngelixa iRavens yayixhonyiwe. Izigidi ezingama-32 zeedola eziqinisekisiweyo zokutyikitya zingaphezulu kwe- $ 6 yezigidi ngaphezulu kukaLandon Collins ekuvunyelwene ngaye neWashington ekuqaleni kwale veki.
Ukutyikitywa kwe-Ingram ikwayintshukumo ephawulekayo yeRavens GM entsha Eric DeCosta. Isivumelwano siza emva kweeveki ezimbini emva kokubuyela emva kuka-Alex Collins emva kokubanjwa ngenxa Ingozi yemoto ekuseni-Matshi 1 . UCollins uphume ekuthandweni njenge-rookie Gus Edwards ephethe ngcono unaniselwano kukhetho lokufunda kunye noLamar Jackson. IRavens ikhokele iligi kwimizamo yokukhawuleza kwi-2018, kodwa yaxhomekeka kuJackson no-Edwards, ii-rookies ezimbini eziluhlaza; UJackson ukhokele iligi kwiimpazamo. U-Ingram uya kubonelela ngamava abalulekileyo ebaleni elingasemva elinokuthi likhokele iligi kwimizamo yokukhawulezisa kwakhona kule sizini.
U-Ingram wayethathwa njengomgqatswa ukuba abuyele eNew Orleans, apho wayedlala khona okoko abangcwele bamyilisela i-28 iyonke kwi-2011, emva kokuba waba ngumdlali wokuqala we-Alabama ukuphumelela indebe ye-Heisman. Kodwa iNew Orleans ivumile ukujongana nokugruzuka kukaLatavius ​​Murray ngoLwesibini. Nge-6-inyawo-3, uMurray zii-intshi ezi-6 ubude kune-Ingram kwaye uya kubonelela ngokuhambelana ngakumbi no-Alvin Kamara, kwaye u-Ingram uya kunika ityala laseRavens kunye noLamar Jackson inkangeleko entsha.
U-Le'Veon Bell Ekugqibeleni unekhaya elitsha-iiJets
Ngomhla wamashumi amathathu anesithathu ku-Matshi 1:16 pm ET
Isixhobo: Iarhente yasimahla ebuyela umva iLe'Veon Bell inekhaya elitsha: IiJets zaseNew York, U-Adam Schefter we-ESPN uxele kwangoko ngoLwesithathu .
ILe'Veon Bell Litise Imali ethile eMlilweni, kodwa ayizange ibe malunga neMali
Inkqubo ye- isivumelwano -Iminyaka emine ye- $ 35 yezigidi eqinisekisiweyo kunye nexabiso eliphezulu le- $ 61 yezigidi- iphela enye yeedrama zeNFL ezinde kakhulu. I-Bell eneminyaka engama-27 ubudala yahlala lonke ixesha le-2018 emva kokuba abakwaSteelers basebenzise ithegi ye-franchise kuye kunyaka wesibini olandelelanayo. Wayesemgceni wokwenza i-14.54 yezigidi zeedola, kodwa emva kokuchukumisa ibhola amaxesha angama-1,541 kumaxesha amahlanu okuqala omsebenzi wakhe, uBell wathi ufuna ukunqanda enye Ixesha lokuchukumisa elingama-400 kwaye ungene kwiarhente yasimahla intsha. Isigqibo sakhe samcaphukisa ezinye iintetho ezingqwabalala kubadlali beqela, kwaye ekugqibeleni uya kwenza kancinci ngonyaka kunokuba ebeya kuba kwithegi kunyaka ophelileyo, kodwa wawufumana umnqweno wakhe.
EBell, iiJets zifumana eyona nto inemveliso ebalekayo kwimvelaphi ye-NFL ngelixa kufanelekile ukuba abe kwinqanaba lakhe lokuqala. I-Bell iye yaqokelela iiyadi ezingama-7,996 ukusuka kwi-scrimmage-ngaphezu kwayo nayiphi na enye Umdlali weNFL ukusukela ngo-1950 Ngeemidlalo zokuqala ezingama-62 zomsebenzi. Kwi-2017, isizini ephelileyo ayidlalileyo, wabalekela iiyadi ezili-1,291, wabamba ukupasa okungama-85 kwiiyadi ezingama-655, kwaye waba ne-11 iyonke yokuthintela. Wabizwa njengeqela lokuqala I-All-Pro okwesihlandlo sesibini kwikhondo lakhe lomsebenzi.
IiJets, ezingene ngaphandle kwexesha lesithuba zinendawo eninzi yekepusi, bekude kucingelwa ukuba inokuba yindawo yokufika kweBell, kodwa okuhlekisayo kukuba, ngekhe babekho kwimeko yokwenza isivumelwano ukuba babengenayo inhlanhla encinci NgoLwesibini: Emva kokuba u-Anthony Barr evumelene ngomlomo neqela, umbuyiseli wabuya umva kwaye wagqiba kwelokuba abuyele eMinnesota kwisivumelwano sexesha elide. Ukuyikhulula loo mali ekugqibeleni kungangqinisisa isindululo somqeqeshi omtsha weentloko uAdam Gase kunye nekota yakhe yonyaka wesibini, uSam Darnold: Kunyaka omnye emva kweeJets ugqibe i-29th kwi-DVOA ekhubekisayo , kujongeka ngathi bazakongeza omnye wabadlali abahlaselayo kwimbali yeligi.
Ixesha lesivumelwano linokuba ziindaba ezimnandi kwelinye icala leBell: Kuya kufuneka kuncede ekunyuseni i-mixtape yakhe entsha, Ubomi bukaGamble , eyehla ezinzulwini zobusuku ET ngoLwesithathu . Mhlawumbi ukubheja kwakhe kuye kwahlawula.
UDee Ford uxelwe ukuba ubhekise kwii-49ers
Ngomhla we-12 kuMatshi 9: 26 PM KUNYE
Isixhobo: I-San Francisco 49ers ivumile ukuba ithengise i-2020 yesibini yomjikelo we-franchise-tagged Kansas Chiefs linebacker Dee Ford, Imidlalo eboniswe ’S UAlbert Breer uxele ULwesibini. UFord kunye neqela lakhe elitsha kusazakufuneka benze isivumelwano esitsha.
UFord, ojika i-28 kwiveki ezayo, uye waqhekeka ngo-2018, waqokelela iingxowa ezili-13 kunye nezixhobo ezisixhenxe ezinyanzelisiweyo-zombini ezifundo eziphezulu-ngelixa esenza iPro Bowl yakhe yokuqala. Ngokwe-Pro Soccer Focus, wakhokela Abakhuseli abasemacaleni koxinzelelo lwe-QB kunye nama-84 .
Okubandakanyiweyo kwingcinezelo yeligi ka-Dee Ford ekhokelela kuxinzelelo lwama-84 ibingama-35 eeknockdowns (iingxowa + zokubetha) ezikhokele iligi. pic.twitter.com/7GIAa9Qocc
-Ugxilwe kwiPro Soccer (@PFF) Ngomhla wamashumi amathathu anesithathu ku-Matshi 2019
Ukurhweba ukhetho lokuqala lwe-2014 luyinxalenye ye-Chief's overhaul yokuzikhusela. Emva kokuphulukana nomdlalo wetayitile ye-AFC xa besilele ukumisa iiPatriots kuhambo lokuqala lwexesha elongezelelekileyo, iqela lagxotha umququzeleli uBob Sutton kunye nabasebenzi abaninzi abazikhuselayo. Nge-Cawa, iqela likhuphe umlingisi u-Justin Houston emva kokusilela ukufumana iqabane lakhe kwezorhwebo kunye nomvuzo wakhe osisiseko we-15.25 yezigidi ze-2019. Bavumile isivumelwano seminyaka emithathu esixabisa i $ 42 yezigidi ngokhuseleko uTyrann Mathieu ngoMvulo.
ISan Francisco ikwindawo yokwenza ukuzikhusela emva kokugqiba i-23rd kwi-DVOA yokuzikhusela. Iqela langena kwi-offseason phakathi kwelona qela likhulu lomvuzo webhola ekhatywayo. NgoMvulo, batyikitye i-Tampa Bay Buccaneer Kwon Alexander kwisivumelwano esona sisityebi somntu obuyela umva ngaphakathi. Banokhetho lwesibini ngokubanzi kuyilo luka-Epreli , enemithwalo ye italente yokudlula ngokukhawuleza . Ngomqeqeshi oyintloko uKyle Shanahan kunye no-GM John Lynch bangene kunyaka wabo wesithathu kunye neqela kunye nekota uJimmy Garoppolo ebuya kwi-ACL iinyembezi, i-49ers ngokucacileyo inethemba lokuthintela elinye ixesha elilahlekileyo.
U-Odell Beckham Jr. uthengiselwe iiBrown
Ngomhla we-12 Matshi 8:42 PM KUNYE
Isixhobo: Kuhlekisiwe kwaye kubhekiswa kuko, kodwa ngoku kujongeka ngathi kusemthethweni: Izigebenga zaseNew York ziye zathengisa umamkeli weenkwenkwezi obanzi u-Odell Beckham Jr., zamthumela eCleveland Browns kuhambo lokuqala olwaxelwa ngoLwesibini ngu INethiwekhi yeNFL kaMike Garafolo . Ngoku ka UAdam Schefter we-ESPN , iiGiants ziya kufumana i-17th jikelele yokukhetha kunye nokukhethwa kwesithathu kwinqanaba lalo nyaka, kunye nokukhuseleka kweJabrill Peppers.
U-Odell Ngumdlali onqabileyo ogqithisa isigcina-ntloko-kwaye izigebenga zimrholisile nje
Ungayinceda njani u-Odell Beckham Jr. Baker Mayfield kunye neeBrown
Lixesha lokuthabatha iiBrown ngokuNzulu ngoku ukuba baneOdell
Ukuphelelwa lithemba okungenasiphelo kweeGiants kunye neKick Fandom
Intshukumo eyoyikisayo iza emva kweeveki zamarhe okuba iiGiants zithatha umnxeba kumaqela anomdla kule 26-yeminyaka ubudala. Umphathi Jikelele u-Dave Gettleman wayiphindaphinda le ntetho, kwaye kwiintsuku ezintandathu ezidlulileyo waphinda wathi ukuba iqela alizange lisayine u-Beckham ukuba amthengise. Nangona kunjalo, iingxelo zivele ngoLwesibini kwasekuqaleni ukuba iqela le-AFC eMantla belikwiingxoxo zokumfumana. Eli qela lajika laba yiBrown.
U-Beckham lixesha lesithathu Pro Bowler kwaye yenye yeligi Iinkwenkwezi ezigqithileyo . Ubambe ukupasa okungama-77 ngeewadi ezili-1,052 ngo-2018, nangona wayedlala kwimidlalo eli-12 kuphela. Kodwa njengokuba iNew York iye yasokola kwezi sizini zimbini zidlulileyo, u-Beckham ngamanye amaxesha makakhathazeke umboniso.
ECleveland, u-Beckham uza kujoyina iqela eliselula eligqibe ukubulela kushushu kwisizini ephelileyo kwinxalenye enkulu kulwaphulo-mthetho olwenziwayo. Phantsi kukaFreddie Kitchens, umlungelelanisi okhubekisayo ngelo xesha nowathi wabizwa ngokuba ngumqeqeshi oyintloko weqela kule offseason, hayi. 1 ngokukhetha konke uBaker Mayfield ujongeka ngathi superstar ngokwakhe . Ngoku uyakhula ngomnye wabona bamkeli babalaseleyo kumdlalo.
U-Odell Beckham Jr. ubhekise eCleveland, @AdamSchefter iingxelo.
Eli nyathelo liza kuphinda limanyanise u-Beckham kunye nomhlobo kunye neqela lakhe langaphambili uJarvis Landry. Zombini zidityanisiwe ngaphezulu kwe-4,100 yokufumana iiyadi kumaxesha abo ama-3 kunye kwi-LSU. pic.twitter.com/m91demrYC4
-Izibalo ze-ESPN kunye nolwazi (@ESPNStatsInfo) Ngomhla wamashumi amathathu anesithathu ku-Matshi 2019
Izigebenga zasayina u-Beckham kwisivumelwano seminyaka emihlanu, i-90 yezigidi zeedola kunye ne- $ 65 yezigidi eziqinisekisiweyo ngaphambi kwexesha elidlulileyo. Uhlawulwe imivuzo esisiseko ye- $ 16.75 yezigidi ze-2019 kunye ne-14 yezigidi kwi-2020, kwaye iiBrown zinokuphuma kwisivumelwano ngaphambi kokuba i-2021 yeligi iqale.
U-Anthony Barr Ulahla iiJets ukuba zihlale neeVikings
Ngomhla we-12 kuMatshi, ngo-1: 32 PM KUNYE
UDanny Heifetz : Ngenye imini emva kokuba u-Anthony Barr evumelene ngesivumelwano ne-New York Jets, kunye neeyure nje emva kokuba etyelelwe ngumoya wekamva lakhe emcela ukuba acinge ngokutsha ngobomi bamaxesha e-4 ukuya ku-12 kunye nezikhuselo ezisemva kwiphepha Iposi iNew York , U-Barr utshintshe intliziyo kwaye wabuyela eMinnesota, INethiwekhi yeNFL kaMike Garafolo iqale yanika ingxelo ngolwe-Lwesibini .
Oku kunokwenzeka kuba abadlali ngobuchule abanakusayina izivumelwano zabo kude kubethe intsimbi yesi-4. ET ngolwesiThathu, kwaye iintsuku ezimbini ezikhokelela kuvulo olusemthethweni lwearhente yasimahla ithathwa njengexesha elisemthethweni apho amaqela kunye nabadlali banokuthetha-thethana. Rhoqo xa kuvunyelwene ngemvumelwano, ithathwa njengesivumelwano esenziweyo nokuba intshukumo ayikho semthethweni. Isigqibo sikaBarr ngokuqinisekileyo songeza umdlalo othile kwiJets 'offseason, ebelawulwa nguGM Mike Maccagnan esenza uthotho lokusayina okukhulu kwearhente yasimahla yokugcwalisa imingxunya aphoswe kuyilo.
Inethiwekhi yeNFL kaIan Rapoport utshilo uLwesibini ukuba u-Barr uzakusayina isivumelwano seminyaka emihlanu esiqinisekiswe nge-33 yezigidi zeedola. Inokufikelela kwixabiso eliphezulu le- $ 77.5 yezigidi ngezikhuthazi.
Umgca we-backbacker wangaphakathi wenza iPro Bowl kwixesha ngalinye lonyaka odlulileyo. Nangona kunjalo, iiJets kuye kwaxelwa ukuba zimthatha njengomdlali wangaphandle onokuthi akhawulezise umntu odlulayo-ngokufana nendima ayidlalileyo e-UCLA ngaphambi kokuba abhalelwe i-9 iyonke ngo-2014.
IiJets kuyabonakala ukuba zisebenzise imali ekhululwe kukutshintsha kwentliziyo kukaBarr ukwenza isithembiso sokugqibela kuLe'Veon Bell.
Ndikrazukileoooo ngoku ... izigqibo
-Le'Veon Bell (@LeVeonBell) Ngomhla weshumi elinanye ku-Matshi 2019
Itshizi enkulu: Abapakishi batyikitye ii-FAs ezine, baqhubeke nendlela yabo entsha
Ngomhla we-12 kuMatshi, ngo-12: 37 P.M. KUNYE
UHeifetz: Kudala-dala, kwi2017, xa amaPatriot ayephumelele nje iSuper Bowl ezintlanu kwaye Ukwamkelwa kwabafundi beekholeji yayingumbandela ongenakufikeleleka , iGreen Bay Packers lelona qela beligi elineligi. Akusenjalo. Ngaphantsi komphathi jikelele omtsha uBrian Gutekunst, othathe indawo kaTed Thompson kunyaka ophelileyo, iqela lichithe iarhente yasimahla ngokungathi ibingekho kwiminyaka engaphezulu kwe-15. NgoLwesibini, abaPacker bavumile ukujongana neearhente ezine zasimahla:
Ukhuseleko lwangaphambili lweBhele u-Adrian Amos uvumile kwisivumelwano seminyaka emine esinexabiso eliphezulu le-37 yezigidi zeedola, ngokwe-ESPN UAdam Schefter .
Owayesakuba ngummeli weBroncos okhubekisayo uBilly Turner uvumile kwimvumelwano yeminyaka emine enexabiso eliphezulu leedola ezingama-29.5 ezigidi, ngokutsho Isikimu .
Owayesakuba ephumelele eWashington u-Preston Smith wasayina isivumelwano seminyaka emine nge-16 yezigidi zeedola zokutyikitya ezixabisa i-52 yezigidi zeedola kwiminyaka emine, ngokweNFL Network's UIan Rapoport .
Owayesakuba epasile iRavens edlula uZa'Darius Smith naye uvumile kwisivumelwano seminyaka emine kunye neqela elinexabiso eliphezulu le- $ 66 yezigidi, ngokwe Irapoport .
Ngo-Lwesibini, iqela likhuphe umgca we-linebacker uNick Perry, umjikelo wakhe wokuqala ngo-2012 owayefanele ukuxabisa i-5 yezigidi zeedola, ngelixa wayedlula u-Clay Matthews engummeli wasimahla.
Imali eqinisekisiweyo ayichazwanga kuyo nayiphi na intengiselwano, eyenza ukuba kube nzima ukuyivavanya, kodwa italente iya komeleza ukhuselo lwaseGreen Bay kwiindawo eziphambili. Kunyaka emva kokuzabalaza ukufumana uxinzelelo kwikota echasayo, iiPackers zongeze ezimbini zokupasa eziqinileyo.
Zonke iipakethe zePackers: 87
U-Preston kunye no-Za'Darius Smith: 113
-Mike Renner (@PFF_Mike) Ngomhla we-12 kuMatshi 2019
U-Amosi uza kubonelela ngomdlalo okhuselekileyo okhuselekileyo ngexabiso eliphantsi kunamaqela anikezelweyo nguLandon Collins noTyrann Mathieu kule veki, kwaye kufanelekile ukuba alingane kakuhle nabadlali abaphambili abanesiphiwo sePackers, uJaire Alexander noJosh Jackson, abababhalele owokuqala nowesibini. Umjikelo ophelileyo. Kwicala lokwaphula umthetho, uTurner… ulungile, kodwa iGreen Bay izamile ukugcina umgca wayo ohlaselayo usempilweni kwaye ufuna lonke uncedo olunokulufumana.
IGreen Bay ekugqibeleni iqhubekile nokusuka kumqeqeshi oyintloko uMike McCarthy kule offseason ukunika ukuphela kuka-Aaron Rodgers, kwaye ezi ntshukumo kufuneka zenze ukhuselo olusokolayo ukuvelisa ngokungaguquguqukiyo kule minyaka idlulileyo.
UTeddy Bridgewater Uhlala eNew Orleans
Ngomhla we-12 kuMatshi ngo-10: 22 ekuseni ET
UBen Glicksman : Iiglavu ezimbini zeTeddy ziya kuhlala neeNgcwele, Inethiwekhi yeNFL kaJane Slater uxele ngolwesibini. IiJets zathengisa iBridgewater eNew Orleans kweyeThupha ephelileyo kulandela ukuvela kwe-rookie QB / franchise saviour / Practice God Audible God Sam Darnold, kwaye kuyabonakala ukuba iBridgewater izakusebenzela ukuzilungisa ukuba ibe nguDrew Brees oza kungena ezihlangwini zakhe ekugqibeleni.
Iindlela ezintlanu zokuthatha ukusuka kwi-2019 ye-NFL yasimahla yeArhente yokuSebenza
Isenzo sokugqibela esinentsingiselo seBridgewater safika ngexesha le-2015, xa wayepase iiyadi ezingama-3,231 nge-14 touchdowns kunye neendlela ezisithoba zokufumana njengelungu leVikings. Uye wehla ngomonzakalo owoyikekayo kwiintsuku nje ezimbalwa ngaphambi kokuqala kwephulo le-2016, ebangela uthotho lweekota ezihamba phambili ezitshintshe imisebenzi kaSam Bradford, uCarson Wentz, uCase Keenum, kunye nomdlalo weSuper Bowl uNick Foles.
Kwakukho intelekelelo yokuba iMiami yayijolise kwiBridgewater ukuba ibe yi-QB yayo yokuqala kwi2019, kunye neNFL yeNethiwekhi Ian Rapoport uxele ukuba ilungelo lokuthengisa jikela ingqalelo kuTyrod Taylor . Ikota yekota yaya kwabaNgcwele endaweni yeeDolphins. Iphantse yafana oku kwenzekile ngaphambili .
I-Browns Yongeza u-Sheldon Richardson kwi-Pass Rush ebesele yoyikisa
Ngomhla we-12 Matshi 9:57 ekuseni ET
UGlickman: Yintoni eneentloko ezintlanu, ethanda iidinosaurs, kwaye angatya iikota ezichaseneyo ziphila ngexesha le-2019? Ukuba uqikelele ukujikeleza komgca okhuselayo waseBrown, Siyavuyisana-nina nobabini niyazinikezela kule marike ye-arhente yasimahla kwaye ninobuchule obugqithisileyo ekuthatheni imikhondo yomxholo.
Kwiintsuku nje emva kokurhweba no-Olivier Vernon, abakwaBrown banike uSheldon Richardson iminyaka emithathu, ikhontrakthi yezigidi ezingama-39 ezibandakanya iirandi ezingama-21.5 yezigidi, ngokwe-Adam Schefter ye-ESPN . URichardson uqokelele uxinzelelo olupheleleyo lwe-47 kwisizini ephelileyo, ngePro Foc Focus Focus, kwaye uneengxowa ezingama-23.5 ngaphezulu kwekhondo lakhe lomsebenzi wobungcali. Umntwana oneminyaka engama-28 ubudala uza kujoyina umphambili wokhuselo oqhayisa ngoVernon, Myles Garrett, Larry Ogunjobi, no-Emmanuel Ogbah. Beka ngokulula: Olu lukhuselo lukaCleveland ngoku .
AbakwaBrown bahlala becinga ukuba ngabadlali abaphambili kwi-arhente yasimahla ye-2019, banikwe indawo enkulu yokugcina indawo ebebengene kuyo ngexesha lesizini. Ukulandela le ntshukumo, banokuya ekuweni njengezintandokazi zokuphumelela i-AFC North. Ukuhleka kwexesha elide kweligi ngokukhawuleza kubonakala ngathi kwenza ukuhamba okuninzi okuhlakaniphile. Yintoni enokuthi ihambe kakubi?
IiJets ziya kusayina ngaphakathi kwi-Linebacker uCJ Mosley ukuya kwiRekhodi yokuRekhoda
Ngomhla we-12 kuMatshi, ngo-9: 05 ekuseni ET
UChris Almeida : Umnxibelelanisi we-Linebacker CJ Mosley uvumile ukusayina isivumelwano seminyaka emihlanu, i-85 yezigidi zeedola kwi-New York Jets, i-NFL Network ye-Ian Rapoport ixelwe ULwesibini. UMosley, owayengumdlali wePro Bowler amatyeli amane eBaltimore kwiminyaka emihlanu yokuqala kwiligi, uza kutshixa izigidi ezingama-51 zeedola kwimali eqinisekisiweyo. Omabini la manani edola aya kuseta irekhodi lomgcini-mgca wangaphakathi.
Ngokuzimeleyo, i-26, ingena kwinqanaba lokuqala lomsebenzi wakhe kwaye izakuba kwiziko lokhuselo olusandula ukuqiniswa eNew York. Icandelo lomququzeleli omtsha uGregg Williams ngoku uneenkwenkwezi ezimbini ezisemva eMosley kunye nowayesakuba nguViking Anthony Barr, omiselwe sayina neNew York , kwaye iiJets zinokongeza inkxaso ngakumbi xa bekhetha indawo yesithathu kuyilo luka-Epreli.
Abahlaseli abakaphumi emalini okwangoku
Ngomhla we-11 kuMatshi 11:20 PM KUNYE
UJustin Sayles : Abahlaseli baya kutyikitya ukhuseleko lwearhente yasimahla uLamarcus Joyner kwisivumelwano seminyaka emine, i-ESPN UAdam Schefter uxele ngoMvulo . Iinkcukacha ezipheleleyo zesivumelwano kusafuneka zityhilwe.
UJoyner, oneminyaka engama-28 ubudala, wayemakishwe nge-franchise kwi-2018 yiRams, eyamyila kumjikelo wesibini kuyilo luka-2014. Ngelixa uPhuculo lweBhola ekhatywayo kugxilwe kuye njenge- ukhuseleko olungaphezulu komndilili ngo-2018, amanani akhe athathe idiphu ebonakalayo ukusuka ngo-2017 -iminyinyiva yakhe yehla ukusuka kathathu kuye komnye, kwaye wazikhusela iipasi ezintathu kuphela xa kuthelekiswa nezisithoba kunyaka ophelileyo. Uye wajongeka elahlekile ekugubungeleni ngamanye amaxesha ngeli xesha liphelileyo, ngakumbi kumdlalo wobuntshatsheli we-NFC, xa wayeka ipasi elide kuTed Ginn Jr. emva kwexesha kwikota yesine ebeka abaNgcwele kwindawo yokuphumelela. Ngokudumazayo, iNew Orleans ayizange, ngokuyinxenye ngenxa yokuphazamiseka kokungabikho komnxeba kuNickell Robey-Coleman kwimidlalo emithathu kamva. Ngelixa iiRams zivumela uJoyner ukuba ahambe, batyikitye u-Eric Weddle oneminyaka engama-34 ukhuseleko kwisivumelwano seminyaka emibini esinezigidi ezi-5.25 zeedola.
Ukutyikitywa okulindelweyo kukhuseleko lwe-5-foot-8 kukuphamba okukhulu kwangoko ngabaRaiders, abasayine uTrent Brown kwisivumelwano esona sikhulu somdlali okhohlakeleyo kwimbali ye-NFL kwaye, kwinto ekujongwe kuyo kakhulu njengokudibana komqeqeshi oyintloko wonyaka wesibini kunye Umenzi wezigqibo nguJon Gruden, wathengisela u-Antonio Brown. Ikwayenye into yokukhuselwa kwegama elikhulu kulandela iingxelo zezivumelwano zikaLandon Collins kunye noTyrann Mathieu ngoMvulo, oko kuthetha ukuba ubumdaka balo nyaka babadlali abafumanekayo kwesi sikhundla akubonakali ngathi kuyabapholisa kwimarike.
I-NFL yasimahla yee-Arhente eziLungileyo: ezilungileyo, ezimbi, kunye ne-Ugly ezivela kwiLigi yokuSebenzisa iSpree
IiJets ziya kusayina u-Anthony Barr, kodwa kuyaxelwa ukuba zijolise ku-CJ Mosley
Ngomhla we-11 kuMatshi, ngo-10: 30 P.M. KUNYE
UHeifetz: IiJets ziceba ukusayina iarhente yasimahla kumgcini ngasemva u-Anthony Barr, UAdam Schefter we-ESPN uxele uMvulo.
U-Barr wayeyindumasi ngaphakathi kwi-backbacker yee-Vikings okoko wathathwa kwi-9 iyonke kwi-UCLA ngo-2014. Wenza iPro Bowl kwisizini nganye kwezine ezidlulileyo, nangona iiJets zingambona egcwalisa indima eyahlukileyo kunaleyo wayenza phantsi kukaMike. Zimmer eMinnesota. NgeeVikings, u-Barr wayehlala ehlasela i-A-gap yamaziko aphikisayo kunye noonogada, kodwa iiJets kunjalo ixelwe uceba ukumsebenzisa ngakumbi njengomgcini webala ongaphandle onokugubungela kwaye abaleke umntu odlulayo, ngokufana nendlela entsha yomququzeleli weeJets uGregg Williams wasebenzisa uJamie Collins eCleveland (mhlawumbi uya kuba nokhuseleko lweeJets uJamal Adams emisa umgca ngokupaka njengoJabrill Peppers enze ). U-Barr wadlala kufutshane nesitayile e-UCLA, apho wayenengxowa ezingama-23.5 kumaxesha akhe amabini okugqibela. Kumaxesha amahlanu e-NFL udibanise iingxowa ze-13.5 ngelixa ethathe inxaxheba eyahlukileyo.
IiJets ziqikelelwa ukuba zinendawo yesibini yekhephu ukusukela ngoMvulo ngokuhlwa malunga ne- $ 80 yezigidi ezishiyekileyo ukuchitha i-2019. Imbaleki 'UConor Hughes, oxele umdla wokuqala wamaJets eBarr kwiveki ephelileyo, utshilo NgoMvulo ngokuhlwa elo qela lisenomdla kwiBaltimore middlebacker CJ Mosley, owathathwa wayothathwa kwindawo enye phambi kokukhethwa kweeJets ngo-2014. IiJets zingabona uBarr noMosley njengabadlali ababini abohlukeneyo abazakudlala izikhundla ezahlukeneyo. Umdla wabo kuMosley usenokuthi ukupela isiphelo somgcini webala uDarron Lee-owayeyilelwe kumjikelo wokuqala woyilo luka-2016-embindini wokhuselo lwaseNew York. IiJets khange ziyilwe kakuhle phantsi kwe-GM Mike Maccagnan, ke mhlawumbi banokugcwalisa ukungabikho koluhlu lwabo (kunye neentliziyo zabalandeli babo) ngokutshisa ngemali.
UTyrann Mathieu kunye no-Eric Berry baya kuba yindawo enye ekhuselekileyo yokuzikhusela
Matshi 11, 8:29 PM KUNYE
UHeifetz: IiKhosi zeSixeko saseKansas kulindeleke ukuba zisayine ukhuseleko uTyrann Mathieu kwisivumelwano seminyaka emithathu esixabisa i- $ 42 yezigidi, iNFL Network's UIan Rapoport uxele ngoMvulo. Isixa semali eqinisekisiweyo asikaziwa.
UMathieu ubonelela iChiefs ngeetalente eziziisekondari ebezizidinga kakhulu kwisizini ephelileyo, xa ukuziphendulela kwabo kubanjelwe kunye ngeengxowa ezifanelekileyo, iteyiphu yomtya, kunye elona khokelo likhulu liphakathi ngokuqhuba kwibhola ekhatywayo. Owona mva wabo wokuzikhusela, u-Eric Berry, wayengenguye emva kokuqhaqha i-Achilles yakhe ngo-2017, kwaye okona baphambili kubo, uKendall Fuller (abathi ngobulumko bambamba kurhwebo luka-Alex Smith), wonzakala esihlahleni ngoDisemba. Eminye imiqolo yokuzikhusela yesiXeko saseKansas-uRon Parker, uSteven Nelson, kunye no-Orlando Scandrick-isusela ekulungiseleleni nasekudleni. UMathieu akanakukutshintsha ukuzikhusela kwabo ngobusuku obunye, kodwa unika iChiefs imisebenzi eyahlukeneyo. Unokudlala ukhuseleko lwendabuko, adlale kufutshane nomgca wokukhuhla kwaye ajongane kakuhle, okanye afake umgca kwislot njengoko iiNkosi zizama ukutshintshela iFuller iye ngaphandle. Isixeko saseKansas sinciphise u-Justin Houston kwangoko kule veki ukuze asindise i-14 yezigidi zeedola kwisithuba se-cap, kwaye ngoku banikezele ngesixa-mali ku-Mathieu kwisivumelwano esibiza i-14 yezigidi.
Nditsho nje kuba u-Mathieu utyikitye iminyaka emihlanu yokwandiswa kwekhontrakthi exabisa ukuya kuthi ga kwi-62.5 yezigidi zeedola nge-40 yezigidi eqinisekisiweyo ngo-2016, kodwa kunyaka ophelileyo iiKhadinali zimnqumle unyaka nje omnye kunye ne-20 yezigidi kwisivumelwano. Ngeli xesha kunyaka ophelileyo, Ukhuseleko lweNFL lwalufumana ukungabikho komdla kumaqela , kunye noMathieu ngokwakhe batyikitye unyaka omnye, $ 7 yezigidi bajongana neeTeans ukuzama ukufumana isithembiso esingcono ngo-2019. Waphumelela. Nangona wayeyena kuphela ukhuseleko oluphezulu lwama-21 ngokutsho kwePro Football Focus kunyaka ophelileyo, i-14 yezigidi zeedola zonyaka ziya kulungela isivumelwano esitsha sikaLandon Collins njengesona siphezulu kwibhola ekhatywayo.
Ewe ukhuseleko oluhlawulelwa kakhulu ngomvuzo ophakathi ngonyaka ngaphambi koMvulo yayinguBerry. Yimali eninzi leyo iqela elinye elinokuyisebenzisa kukhuseleko, kwaye ukuba ukhuselo aluphucuki emva kokuyeka iiyadi yesibini yokupasa kwiligi kunyaka ophelileyo, ayiqondakali.
Iingcebiso zikaTerrell, uKumkani waseNyakatho akasekho
Ngomhla we-11 kuMatshi, ngo-7: 19 PM KUNYE
UHeifetz: Kubonakala ngathi Iingcebiso, inkokheli yexesha lonke laseBaltimore kwiingxowa, ayisayi kuba yiRaven. Ngelixa kungekho sivumelwano sichaziweyo endaweni, yeNFL yeNethiwekhi yeIan Rapoport utshilo NgoMvulo ukuba ii-Suggs zingasayina kunye nee-Arizona Cardinals.
I-Ravens yaqulunqa ii-Suggs 10th ngokubanzi ngo-2003 ngaphandle kwe-Arizona State (nangona wayefundile ngokwenene Ibhola ke iYunivesithi eNzima phantse amashumi amabini eminyaka) kwaye ngoku iiSuggs zingabuyela kwindawo yasePhoenix kwisizini ye-17 yeNFL. (Ii-Suggs kunye noJason Witten ngabo kuphela abadlali abasayilwayo ngo-2003 abasese-NFL.) I-Suggs yeyesithathu ngalo lonke ixesha kwiingxowa zokudlala kwaye iyinkokeli esebenzayo kwiingxowa ngoku ekubeni uJulius Peppers ethathe umhlala-phantsi.
UTerrell Suggs wayeneengxowa ezili-132.5 kwikhondo lakhe leRavens, ebotshelelwe noLawrence Taylor ngowesithathu-nangowuphi na umdlali onelungelo elilodwa, elandela uBruce Smith kuphela ngeeBhili kunye noMichael Strahan neeGiants.
-Izibalo ze-ESPN kunye nolwazi (@ESPNStatsInfo) Ngomhla weshumi elinanye ku-Matshi 2019
Iigragi zisafumene isixa esimangalisayo esisele kwitanki. Uqokelele iingxowa ezisixhenxe kwisizini ephelileyo kunye nama-26 kumaxesha akhe amathathu okugqibela. Ukusukela oko wakrazula i-Achilles tendon yakhe kwaye waphoswa uninzi lwe-2015, uphose umdlalo omnye. Ngaphandle kokujika i-37 ngo-Okthobha, unokubonelela ngokuqinileyo kuChandler Jones ebaleka eqongeni.
Iziqulatho I-bio ye-Twitter ubhengeza ukuba nguKumkani omtsha waseMantla, kodwa ngoku xa eshiya iNtshonalanga ye-AFC esiya kwi-NFC West akucaci nokuba uza kuphinda abe liGosa laseNtshona.
UDeSean Jackson Uza Ekhaya
UKUHLAZIYIWEYO: Matshi 11, 6:27 pm ET
I-Tampa Bay ivumile ukuba ithengise uJackson kunye no-2020 okhethiweyo kumjikelo wesixhenxe ukuya ePhiladelphia kukhetho lwe-2019 lwesithandathu, ESPN UChris Mortensen uxele UMvulo. UJackson uza kufumana i-13 yezigidi eqinisekisiweyo kwisivumelwano sokuhlengahlengiswa.
UHeifetz: UJackson ubonakala ngathi usendleleni ephuma eTampa Bay, kwaye indawo yakhe elandelayo angaphinda abuyele kwikhaya lakhe lokuqala lobungcali.
Umamkeli oneminyaka engama-32 uthumele inqaku lombulelo kubalandeli beBucs Kwi-Instagram ngoMvulo kusasa . Kwaye ngexa i-ESPN kaJenna Laine isitsho loo Jackson akakakhululwa , yena noTim McManus baxele ngeCawe ukuba uJackson ufuna ukubuyela ePhiladelphia-kwaye ii-Eagles zinomdla wokuhlangana kwakhona.
UJackson unetyala le-10 yezigidi kwi-2019, nangona iTampa Bay inokhetho lokumkhulula. Uxelwe ukuba ufuna ukushiya iqela ukusukela kwisizini ephelileyo , kwaye ngexa iBucs ingamthengisa, angabinalo ixabiso kwamanye amaqela ukuba angathanda ukudlala kwi-Eagles.
UJackson wanqunyulwa nguChip Kelly ngo-2014, kodwa uKelly kudala wahamba, kwaye uJackson angaba yile nto ifunwa ngamaXhalanga ngo-2019. Anganikezela ngobungakanani obuthe nkqo uPhilly ebesilela kwisizini ephelileyo xa uMike Wallace wophule umlenze wakhe ngeVeki yesi-2 (ngokuchasene neBuccaneers , ngokungaqhelekanga). Iiseti zokuqinisa ezibini zinokuba njalo phakathi Ixesha le-2019, kwaye ii-Eagles sele zinaye uZach Ertz kunye nomdlali onetalente wonyaka wesibini u-Dallas Goedert ekugqibeleni. Isantya sikaJackson siza kuba yinto ebalulekileyo ekutsaleni ityala lama-Eagles kunye, kodwa ukuze uPhilly aqashe uJackson, kungafuneka acime uNelson Agholor.
Isikhumbuzo sokuba uNelson Agholor's $ 9.4 yezigidi zemivuzo ayiqinisekiswanga ngokupheleleyo kude kube Lwesithathu nge-4 pm ET. Ukhozi lunokumkhulula ngaphambi koko kungabikho zimali okanye ziphumo zomvuzo. https://t.co/FGX9iADXV5
-Dan Graziano (@DanGrazianoESPN) Ngomhla weshumi elinanye ku-Matshi 2019
I-Foles in, Bortles ngaphandle e-Jacksonville
Ngomhla we-11 kuMatshi, 5:51 PM KUNYE
Isixhobo: UNick Foles uza kutyikitya isivumelwano seminyaka emine, i-88 yezigidi zeedola kunye neeJaguars eziza kumenza abe ngoyena mntu uhlawulelwa kakhulu kwi-NFL minyaka le, iNFL Network's U-Ian Rapoport kunye noMike Garafolo baxele ngoMvulo . UJacksonville kulindeleke ukuba akhulule ikota ebuyela emva uBlake Bortles Kungekudala emva kweempawu zeFoles .
UJacksonville Uya Kuhlawula iiNick Foles ezi- $ 88 Million ukubasindisa kuBlake Bortles
I-Super Bowl LII MVP iqinisekisiwe $ 50 yezigidi, ngelixa ixabiso lilonke lesivumelwano linokufikelela kwi-102 yezigidi zeedola. Uya kwenza ngaphezulu ngonyaka kunoTom Brady, uRussell Wilson, uBen Roethlisberger, kunye noCam Newton.
Isivumelwano siza emva kokuba uFoles enqabile ukukhetha kwakhe kunye neFiladelphia Eagles ngo-2019. Ngelixa uninzi belulindele ukuba ii-Eagles zenze i-franchise-tag Foles ngethemba lokumthengisa, iqela alivumanga ukwenza njalo. Ngamaqela ambalwa asweleyo kwikota elandelayo, ezinye ziqikelelwe ukuba iiJaguars zingamsayina kwisivumelwano esingayi kumenza abe ngomnye wabaphumeleleyo kunabo bonke kwiligi. Kodwa ngokufaka i-22 yezigidi zeedola ngonyaka, i-Foles kuyacaca ukuba iphumelele le ukubheja kuye.
IiBortles, hayi. 3 ngokukhetha ngo-2014, akazange aphile kwisikhundla sakhe esiphezulu e-Jacksonville. Emva kokuqala kokusebenza kwakhe, wakhokelela iiJaguars kumdlalo we-AFC isihloko ngo-2017 ngasemva kwezomkhosi okhuselayo, kodwa iqela laya ku-5-11 kwisizini ephelileyo, xa iBortles yabhankwa kabini. U-26-oneminyaka ubudala usayine isongezelelo seminyaka emithathu, i-54 yezigidi zeedola kunye neqela ngaphambi kwexesha le-2018, kwaye ikhontrakthi iphethe i-cap ye-16.5 yezigidi zabantu abafileyo ukuba usikiwe ngaphambi kwe-17 ka-Matshi.
UJamison Crowder Uphezulu I-95
Ngomhla we-11 kuMatshi, 5:07 PM KUNYE
UHeifetz: Njengabafundi abaninzi baseDuke, uJamison Crowder uthathe umsebenzi e-D.C aphuma ekholejini kodwa ngoku ufudukela eNew York kwiminyaka engama-20 ubudala. I-jitterbug yangaphambili eyamkelayo yaseWashington izakusayina kunye neeJets nje ukuba iarhente yasimahla ivule, ivumelane ngesivumelwano iminyaka emithathu ene- $ 17 yezigidi eqinisekiswe ngokupheleleyo kunye nexabiso eliphezulu le- $ 28.5 yezigidi, ngokweNFL Network's UMike Garafolo .
I-Crowder ibhekane nokulindelwa okukhulu eWashington emva kokuba ikota yesine ikhethwe njenge-rookie ngo-2015 kunye nokubanjwa okungama-59 kweeyadi ezingama-604, kodwa akazange enze ukutsiba okuninzi okwakucingelwa kwiminyaka elandelayo. Ukulimala kweqatha kwi-Crowder enkulu ye-2018, kodwa iiJets zibhenka ukuba iCrowder iya kuba nemveliso ngakumbi eNew York njengommkeli obalaseleyo osebenza kwiindlela eziphakathi embindini wonyaka wesibini kwikota yesibini uSam Darnold. IiJets zinezikhephe ezininzi, kwaye zikwabikwa ngathi zijonga ngaphambili iViking U-Anthony Barr .
Izigebenga Vumela uLandon Collins Umhlaba ngokwahlulahlula iCandelo
Ngomhla we-11 kuMatshi, ngo-4: 01 P.M. KUNYE
Isixhobo: Kwiveki enye emva kokuba izigebenga zenqabile ukusebenzisa i-franchise tag kukhuseleko uLandon Collins, uzimisele ukusayina nomlingani wabo wecandelo eWashington, INFL Network ye-Ian Rapoport uxele ngoMvulo.
UCollins uza kutyikitya isivumelwano seminyaka emithandathu, i-84 yezigidi zeedola neWashington xa iarhente yasimahla iqala ngoLwesithathu. Uya kuqinisekiswa nge-45 yezigidi zeedola, eya kuthi ihlawulwe kwiminyaka emithathu yokuqala yesivumelwano.
Ukukhethwa kwama-33 ngokubanzi ngamaGiants ngo-2015, uCollins ngumdlali oguquguqukayo onokukwazi ukungena ngaphakathi okanye ngaphakathi kwebhokisi. Akanaso isantya se-elite, kodwa ubekhethekile xa edlala kufutshane nomgca kwaye ekhusela islot okanye iindlela zangaphantsi, kwaye angangqinelana neziphelo ezixineneyo zokugubungela umntu. UCollins uza ngonyaka ozayo-u-2018 wayengowokuqala wobomi bakhe ngaphandle kokuthintelwa, kwaye ukupasa kwakhe kane kwakukwezona zimbalwa wayenazo-kodwa kwiminyaka engama-25 ubudala, unokuba lilitye lembombo elikhuselayo eWashington kwiminyaka ezayo.
UCollins wabetha iarhente yasimahla emva kokuba iiGiants zikhethe ukungasebenzisi i-franchise tag kuye, eya kuthi ibize i-11.15 yezigidi zeedola ngo-2019. Ngoku, uzimisele ukwenza i-14 yezigidi zeedola minyaka le eWashington. Ungowokuqala kwi-domino ukuwela kwiklasi ekhuselekileyo yonyaka ekhuselekileyo, ekwabandakanya u-Earl Thomas, uTyrann Mathieu, Ha Ha Clinton-Dix, uAdrian Amos, kunye nokubulawa kwezinye izinto ezinokubangela umahluko. Kunyaka omnye emva kokuba iiarhente zasimahla zikwisikhundla sokufumana izivumelwano zomhlaba ezihambelana nokusebenza kwabo, isivumelwano sikaCollins sinokubonisa intwasahlobo ethembisayo yezokhuseleko.
Iingonyama zongeza iTrey Iintyatyambo kuba Ngokwenyani, Ngokwenene zifuna ukuba ziPatriots
Ngomhla we-11 kuMatshi, 3:57 PM KUNYE
URiley McAtee : Wonke amaqela afuna ukuba ngamaPatriot, kodwa iiNgonyama zithatha loo njongo ngokuthe ngqo kunoko kuninzi. Ngo-2016, i-franchise yaqesha umlawuli we-New England we-pro scouting, uBob Quinn, ukuba abe ngumphathi wabo jikelele. Kunyaka ophelileyo, beza nomququzeleli okhuselayo wePats uMat Patricia njengomqeqeshi oyintloko. NgoMvulo, bavumile ukusayina i-Pats ne-Dolphins eyamkela ngokubanzi uDanny Amendola kunye Owayesakuba nguPats kunye noSeahawks kwikona yangasemva uJustin Coleman . Ngoku, u-Adam Schefter we-ESPN yenza ingxelo ukuba iiNgonyama ziya kutyikitya i-Trey Flowers zangaphambili zokuzikhusela kwi-Patriots kwisivumelwano seminyaka emihlanu (ixabiso lesivumelwano alikaxelwa).
Ukupasa kuka-25-oneminyaka ubudala wayenelinye lawona maxesha akhe afanelekileyo kunyaka ophelileyo, ethatha iingxowa ze-7.5 kunye ne-20 QB hits. Ukugxilwa kweBhola ekhatywayo wamnika ibanga lesithandathu kwelona liphezulu phakathi kweendlela zokuzikhusela . Iintyatyambo ziya kunceda ukuphucula umgca weLions okhuselayo, obekwe kwinqanaba I-20 kwiBhola yeBhola engaphandle 'iiyadi ezihlengahlengisiweyo kunye ne-27th kwinqanaba leesaka elihlengahlengisiweyo .
Baninzi abantu ababesakuba ngabapatrioti abasekhoyo kwintengiso yeeNgonyama, kubandakanya u-Chris Hogan, u-Malcom Brown okhuselayo, u-Danny Shelton okhuselayo, u-Jason McCourty okhuselayo kunye nomkhabi uStephen Gostkowski. Kodwa sele ndikhangele phambili kwi-2025 offseason, xa iiLions ziya kuqinisekisa u-Tom Brady oneminyaka engama-47 ukuba aphume kumhlala-phantsi ukulungiselela ukubaleka ngaphezulu.
U-Rich Homie Kwon Ngoku
Ngomhla we-11 kuMatshi, ngo-3: 21 P.M. KUNYE
Isixhobo: I-San Francisco 49ers iyakwenza iarhente yasimahla Kwon Alexander eyona ihlawulwe kakhulu ngaphakathi kumgca wokugcina umgca kwimbali yeligi kunye neminyaka emine, iidola ezingama-54 yezigidi ezibandakanya i-27 yezigidi eziqinisekisiweyo, i-ESPN UAdam Schefter uxele uMvulo .
U-Alexander wayilwa yi-Tampa Bay Buccaneers kumjikelo wesine we-2015 uyilo, kwaye wenza iPro Bowl ngo-2017. Ukugxilwa kweBhola ekhatywayo wamfumana njengomkhuseli ophakathi wexesha le-2018, nangona wayedlala kwimidlalo emithandathu kuphela ngaphambi kokukrazula i-ACL yakhe.
Isivumelwano esitsha seminyaka engama-24 siyakumnika owona mvuzo uphakamileyo ophakathi kuwo nawuphi na umgca wangaphakathi kwiligi kwi-13.5 yezigidi zeedola, edlula kwi-12.4 yezigidi zikaLuke Kuechly. Ngelixa ii-49ers zithambekele ekuchitheni ngenxa ye- glut yendawo yetshiphu Ikhontrakthi ka-Alexander kufuneka ibe ziindaba ezamkelekileyo kwiarhente yasimahla ngaphakathi kwabadlali bebhola uJordan Hicks kunye no-CJ Mosley, oya kuthi abe uyalela ngaphezulu kweBuccaneer yangaphambili.
UJason Peters ubuyile kwakhona ukukhusela uCarson Wentz
Ngomhla we-11 kuMatshi, ngo-1: 35 P.M. KUNYE
UHeifetz: NjengoDanny Ocean uthumela iRusty ku uSawule ngaphandle komhlala-phantsi, i-Eagles yaseFiladelphia yamkhupha uPeter ngocingo ngokumthembisa ngengxowa yemali. Ixesha elide elishiyekileyo le-Eagles, elijika i-37 ngoJanuwari, lisayine isivumelwano sonyaka omnye ngoMvulo esixabisa i-5.5 yezigidi zeedola ngexabiso eliphezulu le- $ 10 yezigidi, ngokweNFL Network's UIan Rapoport .
Isivumelwano sokuhlengahlengiswa sinciphisa isixa semali uPeter anokufumana ngeli xesha lonyaka nge- $ 500,000. Kodwa phantsi kwesivumelwano sakhe esidala, ngewayefumene i-1 yezigidi zeedola ngokudlala ngaphezulu kweepesenti ezingama-80 zikaPhilly, enye i- $ 1 yezigidi ngokudlala ngaphezulu kweepesenti ezingama-90 zikaPhilly, kunye ne- $ 500,000 eyongezelelweyo yokwenza iPro Bowl, ngokwe I-Spotrac . Akucaci nokuba isivumelwano sakhe esitsha sisabandakanya izikhuthazi okanye ingaba i-10 lezigidi zeedola ziya kuza nje ngendlela yebhonasi kunye nomvuzo.
Umgcini womzimba masihambe! https://t.co/sp0q0qwGBU
-Carson Wentz (@cj_wentz) Ngomhla weshumi elinanye ku-Matshi 2019
UPeter ebeyiloo yasekhohlo kaPhilly ukusukela ngo-2009. I-Eagles ibinokusuka kuye inikwe indawo yekepusi awayeyithatha kwaye wadlala iHalapoulivaati Vaitai, owayegcwalise uPeter ngexesha lePhilly's Super Bowl. Kodwa ngexa uVaitai emkhulu ku-6-foot-6 no-320 eepawundi, akanazo i-fleet iinyawo ezinjengoPeter, kananjalo uVaitai akanamandla ahlala enxulunyaniswa nomntu olingana naye, njengomrhwebi wetshizi uMychal Kendricks uxelele abakwaBrown ivuliwe IiKnock ezinzima . Ngokucacileyo, ii-Eagles zibeka phambili ukukhusela uCarson Wentz ngoku ekubeni uNick Foles ephuma edolophini.
Abahlaseli bahambisa iitsheki ezinkulu kuBrown-Eli xesha lihlasela uTrent Brown
Ngomhla we-11 kuMatshi, ngo-1: 05 PM KUNYE
McAtee: Yiveki emnandi ukuba nguDerek Carr . Ngaphantsi kweeyure ezingama-48 emva kokuba abaPhuthi bongeze u-Antonio Brown kwisivumelwano kunye ne-Steelers, i-Oakland ngoku sele ikulungele ukutyikitya ababengabaPatriot abashiya uTrent Brown kwiarhente yasimahla. Inkqubo ye- Ingxelo yeminyaka emine, ikhontrakthi yezigidi ezingama-66 zeedola ibandakanya i-36.75 yezigidi zeedola kwiziqinisekiso. Elo lixesha lokophula irekhodi lemali ukwenzela ukuwisa.
Okokugqibela kwesizini i-Patriots ithengise ukhetho lwayo lwesithathu kwii-49ers ngokukhetha ujikelezo lwesihlanu kunye no-Brown, behambisa amanqaku e-48 ewonke kuyilo lokufumana i-lineman entsha ukukhusela icala likaTom Brady elingaboniyo. Kodwa emva kwexesha nje elinye, iiPats zonyule ukungayithengisi i-franchise tag okanye ziphinde zisayine i-lineman eneminyaka engama-26 ubudala, kwaye bazakuqhubela phambili no-Isaiah Wynn-ababhale i-23rd iyonke ngo-2018 kodwa abangazange Ukudlala emva kokulimala kwe-Achilles kwithuba langaphambi kwexesha lonyaka-kwindawo yokuwisa yasekhohlo.
UBrown wadlala ikakhulu kwicala lasekunene lomgca ohlaselayo eSan Francisco kwaye watyhalelwa kwindima yecala elingaboniyo kuphela emva kokonzakala kukaWynn. Kwakucingwa ukuba unokubuyela kwela cala lomgca neqela elitsha kwi-2019 . Kodwa abahlaseli bamhlawula imali yasekhohlo-okanye, ewe, Kaninzi Ngaphezu kokuwisa imali. Olunye ungcakazo lukaJon Gruden kunye noMike Mayock e-Oakland: Ngelixa uBrown esemncinci kwaye enokubanakho, naye waphumelela njengoko ebotshelelwe Ukuhlasela okungcono kwama-32 kwibhola ekhatywayo yexesha elidlulileyo yiPro Football Focus . Ukude kwinto eqinisekileyo. Ke kwakhona, eyona nto ihlaselayo yabona bahlaseli ibale i-76th ( amashumi asixhenxe anesithandathu !! kunyaka ophelileyo ngokulandela umkhondo we-PFF. Leyo yayiyi-rookie uKolton Miller, owathi uRaiders wakhetha ngokukhethwa kwe-15 ngokubanzi. Abahlaseli babenomdla; ngaphandle kokusayina loBrown, uCarr ngekhe abe nexesha epokothweni yokufumana ibhola komnye uBrown.
Ukungena kweli xesha lesiphelo kwakubonakala ngathi iRaiders yayiphakathi kolwakhiwo lwexesha elide. Kwaye babengenasizathu sokukungxama: Ngelinye ixesha elingaphambi kokuba iqela liye eVasgas, ixesha leRaiders lalibonakala lijolise kwi2020, hayi ngo-2019. Ngokufunyanwa kukaBrown, kuyacaca ukuba abahlaseli abayiboni loo nto indlela. Bafuna ukulunga ngoku. Okanye ukuba kulungile ukuzolula, kucacile ukuba abafuni koyika okomzuzwana. Baya kuhlawula ngaphezulu ukuze balunge.
Ukhozi luthembele kuMdibaniso owoyikekayo we-DT noMalik Jackson utyikitya
Ngomhla ka-11 Matshi 11:45 pm ET
UHeifetz: Ukuwisa okhuselayo uMalik Jackson kulindeleke ukuba atyikitye neFiladelphia Eagles, i-ESPN UJosina anderson uxele ngoMvulo. Isivumelwano, esingekagqitywa okwangoku, kulindeleke ukuba sibe seminyaka emithathu kunye ne-30 yezigidi zeedola, ngokuka-Adam Schefter .
UJackson utyikitye isivumelwano seminyaka emithandathu esixabisa i-42 yezigidi zeedola kwaye ukuya kuthi ga kwi-85 yezigidi zeedola kunye ne-Jacksonville kwi-2016, kodwa iqela limkhulule kwiveki ephelileyo njengenxalenye yentshukumo yokucacisa indlela yokwenza ukuba uNick Foles afike. I-Eagles yayiza kumbeka ecaleni kweqela lokuqala i-All-Pro ekhuselayo i-Fletcher Cox ye-duo yasebusuku ngaphakathi e-Philadelphia.
Ukuba igqityiwe, urhwebo luyakuba kukuhamba nje kwangoko kumgca wokuzikhusela kule nyanga kwi-Eagles yesekela likamongameli olawula imisebenzi yebhola uHowie Roseman. Iqela lisayine ipasher rusher Brandon Graham ukuya kwiminyaka emithathu eyandisiweyo exabisa ama-40 ezigidi zeedola, yala ukhetho lokuzikhusela kuTimmy Jernigan, kwaye bathengise ipasher rusher uMichael Bennett kwi-Patriots yokutshintsha emva kwexesha kwi-2020. Ukuhamba kokugqibela kwakumangalisa kuthathela ingqalelo ixabiso likaBennett kukhuselo lwe-Eagles kunyaka ophelileyo, kodwa ukuzisa uJackson kungabonisa ukuba ii-Eagles zijolise ekudibaniseni iinkwenkwezi ezimbini ezikhuselayo ecaleni komnye, njengoko iiRams zenze kwisizini ephelileyo kunye noAaron Donald noNdamukong Suh.
UDanny Amendola usiya eDetroit, aka Patriots Midwest
Ngomhla we-11 kuMatshi, ngo-9: 09 ekuseni ET
Almeida: Umamkeli omkhulu uDanny Amendola umiselwe ukuba atyikitye neeNgonyama zilinde umzimba, UDianna Russini we-ESPN uxele ngoMvulo . IiDolphins zikhethe ukuphuma kunyaka wesibini kwiminyaka emibini, i-12 yezigidi zeedola kwisivumelwano kwiveki ephelileyo.
Urhwebo luka-Antonio Brown lubonelela ngombono kwiKamva labahlaseli
U-Amendola, oneminyaka engama-33 ubudala, uza exesheni xa wenza iminyhadala engama-59 kwiiyadi ezingama-575 ngokomyinge wee-9.7 iiyadi ekubanjweni, onke amanani angena ngezantsi kwalawo awarekhodayo ngexesha lakhe elisempilweni eNew England. E-Detroit, u-Amendola uza kuphinda aqhagamshele kunye nomqeqeshi oyintloko u-Matt Patricia kunye nomphathi jikelele u-Bob Quinn, owayesebenza njengomlungelelanisi okhuselayo kunye nomlawuli we-scouting, ngokulandelelana, kunye ne-Patriots. Ukufuna kweengonyama ukujika kwiiPatriot zaseMidwest kuyaqhubeka.
U-Amendola uza kufaka ecaleni kukaKenny Golladay kunye noMarvin Jones Jr. kwizigqeba ezifumanayo, egcwalisa umngxunya oshiywe nguGolden Tate, owathengiswa ePhiladelphia ngo-Okthobha kwaye ngoku uyiarhente yasimahla. Imigaqo yesivumelwano sika-Amendola kusafuneka ibhengezwe.
IiRams zisayine kwakhona uDante Fowler Jr.
Ngomhla we-11 kuMatshi ngo-12: 26 ekuseni ET
UHeifetz: IiRams zisayine kwakhona ipasile rusher Dante Fowler Jr. kwisivumelwano sonyaka omnye, ngokwe-ESPN UAdam Schefter. I-Fowler, njengeeRams zokuzikhusela i-Ndamukong Suh, yayisetelwe iarhente yasimahla kule veki, kodwa iiRams zigcina iFowler ijikeleze enye iSuper Bowl kwaye ivumela uSuh ukuba ahambe. Iinkcukacha zesivumelwano azaziwa, kodwa kusenokwenzeka ukuba uSuh ngewayebize kakhulu ukugcina kunoFowler. Iqela likwavumela ukhuseleko uLamarcus Joyner ukuba abethe iarhente yasimahla, kodwa kubonakala ngathi sele bethathe indawo yakhe emva kokusayina ukhuseleko lwangaphambili lwaseBaltimore uEric Weddle. Kwakuza kubanzima ukugcina onke amaqhekeza okhuselo kunye emva kokunikezela ngo Todd Gurley, Brandin Cooks, no Aaron Donald ukwandiswa kwemvumelwano ngexesha lokugqibela kwaye isivumelwano sika Jared Goff sisaqhubeka.
U-pedro pascal uyamangalisa umfazi 2
IiJaguars zithathe iFowler okwesithathu ngo-2015 kodwa akazange aphile ngokwesithembiso sokuyilwa kwakhe, ngaphandle kwetalente yakhe enkulu. Ngexesha lokugqibela, iiJaguars zenqabile kunyaka wakhe wesihlanu ukhetho lwe2019, elenza i-2018 yangunyaka wokugqibela wesivumelwano sakhe. Ngo-Okthobha i-30, i-2018, iRams yathumela ukhetho lwesithathu- nolwehlanu eJacksonville yeFowler ukomeleza umjikelo wabo wokubaleka ngenxa yokubaleka kwabo kweSuper Bowl-kwaye kwahlawulwa (kulungile, de kube sekupheleni). UFowler wadlala eyona bhola yakhe ibalaseleyo kwiRams, ngakumbi ngokuchasene neDallas kunye neNew Orleans, emibini yeendlela ezomeleleyo kwiligi.
Eli xesha le-arhente yasimahla aliyi kubona uninzi lokudlula kwiimarike; IDe Ford yaseKansas City, uFrank Clark waseSeattle, uJadeveon Clowney waseHouston, kunye noDemarcus Lawrence waseDallas bonke babephawulwe ngefranchise ngamaqela abo. Nge-Fowler ngoku sele ihambile kuloo mxube, ezona zintle zokudlula ezifumanekayo ziiTrey Flowers zaseNew England, uPreston Smith waseWashington, uDetroit kaHezekile Ansah, kunye noJustin Houston waseKansas, owakhululwa ekuqaleni ngeCawa. Kukho ezinye ezibonakalayo kodwa ezinokuhlanjwa ezinje ngeTerrell Suggs kunye neClay Matthews.
IiNkosi zikhulula uJustin Houston emva kokungaphumeleli ukuMthengisa
Ngomhla we-10 ku-Matshi 5 PM KUNYE
Isixhobo: IiKhosi zeSixeko saseKansas zikhulula iPro Bowl yomqolo wesine u-Justin Houston emva kokusilela ukufumana iqela lokuthengisa kunye nemali yakhe eyi- $ 15.25 yezigidi ze-2019, u-Adam Schefter we-ESPN Kubikwe iCawe .
IHouston, 30, ifumene amanqaku aphezulu ngo-2018 ukusuka kwiPro Football Focus Ngelixa ubhalisa iingxowa ezilithoba kunye nemipu emihlanu yokunyanzelwa. Uba yiarhente yasimahla emva kokuchitha lonke ikhondo lakhe kunye neeNkosi, ezamyilayo kumjikelo wesithathu woyilo luka-2011. IHouston isete irekhodi lesaka leqela elinye lonyaka kwi-2014 nge-22.
Eli nyathelo liza njengoko iiNtloko kubikwa ukuba ziyathengisa umthengisi webhola emva kukaDee Ford, abathe bamnikezela ngefranchise kwiveki ephelileyo. UFord, obekunye neqela ukusukela ngonyaka we-2014, ebenexesha lokuphumla ngo-2018 njengoko wayeqokelela iingxowa ezili-13 kunye neziphoso ezisixhenxe ezinyanzelisiweyo. Nangona kunjalo, iqela liyigqibile Ixesha lama-26 kwi-DVOA yokuzikhusela kwaye wagxotha umnxibelelanisi okhuselayo uBob Sutton emva kokuphulukana nomdlalo wobuntshatsheli we-AFC.
UAnthon Brown nguRaider wase-Oakland
Ngomhla we-10 kuMatshi, ngo-1: 07 ekuseni ET
Isixhobo: Ewe, lo ujongeka esemthethweni: U-Antonio Brown ubhekise kwi-Oakland Raiders, owamkelayo ngokubanzi wabhengeza kwi-Twitter ngentsasa yangeCawa.
️☠️☠️ #RaiderNation pic.twitter.com/ul6lIVk9dE
-Antonio Brown (@ AB84) Ngomhla we-10 kuMatshi 2019
I-Raiders iya kunika i-Steelers ukhetho lwesithathu nolwesihlanu lokutshintshiselana ngeBrown, utshilo u-Adam Schefter we-ESPN. I-Oakland nayo yongeza imali kwisivumelwano sikaBrown, esisele neminyaka emithathu. UBrown uya kuqinisekiswa ngaphezulu kwe- $ 30 yezigidi kwaye unethuba lokufumana ngaphezulu kwe- $ 54 yezigidi ngezikhuthazi.
Ukuphela kobukumkani obungenabukhosi
I-Raiders Won i-Sweepstakes yoRhwebo luka-Antonio Brown. Zithini izibonelelo?
Le ntshukumo inokuba sisigqibo sikaJon Gruden, umqeqeshi oyintloko wonyaka wesibini kunye nomenzi wezigqibo we-de facto owayegxekwa kunyaka ophelileyo ngokuhambisa amagqala amagqala anje ngoKhalil Mack emva kokuthatha indawo. UBrown liqela lokuqala leqela lonke i-All-Pro kwaye yaqokelela ngaphezulu kweewadi ezili-1,200 kunye nezamkelo ezili-100 kwisizini nganye kwezi zintandathu zidlulileyo zeSteelers. Kodwa ubudlelwane bakhe nombutho buphazanyiswa ukuphela kwexesha le-2018: UBrown wayengasebenzi kwiqela leVeki ye-17 yemidlalo ye-17 kunye ne-Bengals emva kokuxelwa kokuphikisana noogxa bakhe kunye nokutsiba imikhwa xa kusenziwa umdlalo. Emva koko wachitha inxenye yokuqala yexesha elalikho ebiza kwikota yesibini uBen Roethlisberger kwaye uthumele iividiyo ze-Instagram zifuna ikhontrakthi entsha ngemali eqinisekisiweyo ngakumbi kwaye ubhaptiza ngegama lesidlaliso elitsha, Mnu Big Chest. (Okanye ibiyiyo UMnu Big iitshekhi ?)
UBrown uzokujoyina ityala eligqibe ama-25 kwi-DVOA ekhubekisayo ngo-2018. Ikota yokuqala uDerek Carr wasokola ngamanye amaxesha kunyaka wokuqala kaGruden ubushushu bavutha kwaye iqela liye 4-12, kodwa abahlaseli kubonakala ngathi bazibophelele kulowo ufowunela umqondiso- okwangoku, ubuncinci. Emva kokurhweba phakathi kwexesha eliphakathi lika-Amari Cooper wagweba oyena mntu wamkelekileyo uCarr awakha wasebenza naye, abahlaseli banika iQB enye yezona ndawo zibalaseleyo zabamkeli kwimbali yeligi. Kwaye uBrown ubonakala onwabile ukuqala ngokutsha noCarr:
Ukuthanda umntu ukuqala ukumbona...... @kwenze pic.twitter.com/YiuCLq3G9z
I-Oakland kusenokwenzeka ukuba inethemba lokongeza amandla eenkwenkwezi kunye nokwakha umntu oza kulwa naye ngaphambi kokufudukela eLas Vegas, ekulindeleke ukuba yenzeke ngo-2020. Banokhetho lokuqala kumjikelo ka-Epreli wokugcwalisa uluhlu lwabo. yayiyindala yeligi ngumdlali ophakathi ubudala kwi-2018 .
AbakwaSteelers bakhuthazeka ukuba bathengise uBrown ngaphambi kuka-Matshi 17, xa kufanelekile ukuba afumane i-2,5 yezigidi zeerandi, kodwa urhwebo lusazakudala i-cap ye-21,1 yezigidi zeedola-isahlulo eshiyekileyo sebhonasi yakhe esayiniweyo kwiqela lakhe langaphambili kwi2019.
Abahlaseli baxhuma phambi kwamanye amaqela anomdla eBrown kubandakanya iWashington, Tennessee, kunye neBuffalo, owokugqibela kubo othe ngoLwesihlanu yaqhubela phambili Ukusuka kurhwebo olunokubakho emva kokuxoxa ngokufutshane ngeparameter enye neeSteelers. Ngokweengxelo ezininzi, ezikaBrown's ukungafuni ukuya kwiiBhili ibangele ukuba iingxoxo ziwe.
I-Oakland ifumana i-30-ubudala ubudala ngelixa iphantsi uphando olwenziwe yiNFL Kwisiganeko se-offseason esibandakanya umama wentombi yakhe, nangona kungekho mntu ubanjiweyo kwaye uBrown ukwalile nakuphi na ukungalunganga ngegqwetha. Naye ejongene namatyala amabini kwisehlo apho waphosa ifanitshala Kwibhalkhoni yaseSouth Florida ngo-Epreli 2018.
Umtshato uxelwe ukuba uthathe umhlala phantsi ngaphambi kokuhlala kwi-LA
Ngomhla we-8 kuMatshi 5:49 PM KUNYE
Isixhobo: I-Los Angeles Rams ivumile kwisivumelwano nokhuseleko lwearhente yasimahla uEric Weddle kwiintsuku emva kokuba enqunyulwe yiBaltimore Ravens, iNFL Network's U-Ian Rapoport uxele ngolwe-Sihlanu .
Iqela lokuqala leqela lonke i-All-Pro, elenze iPro Bowl kwisizini nganye kwisithathu kunye neRavens, liza kutyikitya isivumelwano seminyaka emibini kunye ne- $ 5.25 yezigidi eziqinisekisiweyo. Isivumelwano esi sixabisa i $ 12 yezigidi, kubandakanya izikhuthazi.
Ngokwe-Adam Schefter ye-ESPN, umntu oneminyaka engama-34 ngokufutshane uthathe umhlalaphantsi ngaphambi kokundwendwela Intshatsheli ye-NFC Rams ngoLwesine ngokuhlwa . Umtshato uqale yonke imidlalo ye-16 yeRavens kulo nyaka uphelileyo, kwaye ngelixa wayenemiqobo engamkelekanga kunye neepasi ezintathu ezikhuselweyo, yena uzuze amanqaku aphezulu kwiPro Soccer Focus . Unokuba luphuculo kukhuseleko uLamarcus Joyner, othengiswe ngeRams ngo-2018. UJoyner, oneminyaka engama-28 ubudala, ubebonakala elahlekile ekugutyungelweni ngamanye amaxesha kunyaka ophelileyo kwaye wancama ulwamkelo olude kumamkeli weSanta uTed Ginn Jr. owandulela ukungadumisi kwikona yeRams uNickell Robey-Coleman kumdlalo wobuntshatsheli weNFC.
Ukulungiswa: Inguqulelo yangaphambili yesi sithuba ibhekiswe ngokungachanekanga kwiiRams zeLos Angeles njengeentshatsheli zeNFL. Babezintshatsheli ze-NFC.
Umqondiso weDolphins wokwakha kwakhona ngeNgxelo yeAmendola eSikiweyo
Isixhobo: UDanny Amendola uya kuba yintshatsheli yamva nje eMiami, yeNFL Network's U-Ian Rapoport uxele ngolwe-Sihlanu .
Isamkeli esibanzi, esize kwiidolphins kwisivumelwano seminyaka emibini emva kwexesha leminyaka emihlanu eNew England, badlale imidlalo eli-15 ngo-2018 kwaye babamba iipasile ezingama-59 kwiiyadi ezingama-575- amanani akhokeleyo Ulwaphulo lweMiami oludangele . Ngoku ka UCameron Wolfe we-ESPN , IiDolphins zikuthandile okuziswe nguAmendola kwiqela kodwa azimbonanga njengenxalenye yomzamo wabo wokwakha kwakhona phantsi komqeqeshi oyintloko wonyaka wokuqala uBrian Flores.
Ukusika iarhente yasimahla engakhange iqulunqwe eneminyaka engama-33 kuya kusindisa i-Miami $ 6 yezigidi kwisithuba se-cap. Eli nyathelo lilandela isigqibo seqela ngoLwesine sokusika amagqala ka-Andre Branch kunye noTed Larson, edityanisiweyo eya kuthi idale malunga ne-9 yezigidi zeedola.
UMichael Bennett-to-New England Phantse kwenziwe, uSchefter uthi
Ngomhla we-8 kuMatshi 4:04 PM KUNYE
Isixhobo: Emva kwexesha elinye ePhiladelphia, uMichael Bennett uxelwe ukuba usondele ekurhwebeni kwiNew England Patriots, UAdam Schefter uxele ngolwe-Sihlanu .
Le ntshukumo izakuzisa igqala kwigalelo lokuzikhusela lase-New England, elinokuthi liphulukane neTrey Flowers emva kokuba iqela linqabile ukufumana ilungelo lokuzikhusela ngaphambi komhla wokugqibela wangoLwesibini. Ukuba kugqityiwe, iNew England iyakufumana uBennett kunye no-2020 wokujikeleza umjikelo wesixhenxe ngokutshintshela umjikelo wesihlanu wowama-2020, Schefter uthe .
U-Bennett, u-Pro Bowler ophindwe kathathu kunye no Seattle, wathengiswa e-Philadelphia okokugqibela kwisizini yesihlanu neyesixhenxe kunye nomamkeli Marcus Johnson. Ukugxilwa kweBhola ekhatywayo umlinganise kumkhuseli ongaphezulu komndilili ngamanqaku angama-75.9 ngo-2018 njengoko wayetsala iingxowa ezilithoba. I-Eagles kusenokwenzeka ukuba ithengise uBennett njengenxalenye yomzamo wabo oqhubekayo wokukhulula indawo yentloko: Iqela langena kwi-offseason $ 12.1 yezigidi ngaphezulu kwekepusi , kodwa usekela-mongameli olawulayo wemisebenzi yebhola ekhatywayo uHowie Roseman wenze igumbi ngokuhlengahlengisa izivumelwano zikaJason Kelce kunye noLane Johnson kunye nokwala ukhetho lwango-2019 kwisivumelwano sikaTimmy Jernigan.
Kukho iqhekeza elinye elinomdla wokubukela noBennett kwi-Patriots: ubume bomntakwabo uMartellus, isiphelo esiqinileyo esiphumelele iSuper Bowl neNew England ngo-2017. UBennett omncinci uthathe umhlala-phantsi emva kokusikwa liqela kunyaka ophelileyo kwaye ngoku uhleli umboniso kubizwe Uninzi lwebhola ekhatywayo yeYahoo, kodwa wathi kwi Ividiyo ye-Instagram kwinyanga ephelileyo ukuba angathanda ukubuya kwakhona kunye nomqeshi wakhe wangaphambili. (Schefter uxele ngolwe-Sihlanu ukuba imithombo ithi Umdla kaMartellus uyinyani ngoku uMichael kusenokwenzeka ukuba usendleleni eya eNew England.) I-Patriots iphumelele iSuper Bowl ngoFebruwari ngawo omabini amawele kaMcCourty kuluhlu, ke mhlawumbi ikhona into yokudibanisa abantakwabo.
I-Steelers yenza urhwebo. Hayi, Hayi Lowo.
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo, ngo-2: 23 P.M. KUNYE
Isixhobo: UMarcus Gilbert uzimisele ukuqala Isahluko esilandelayo eArizona, i-ESPN's Adam Schefter ingxelo ngoLwesihlanu .
Ukhetho lomjikelo wesibini ngo-2011, lo mthetho uhlaselayo wawusebenzise ngokupheleleyo umsebenzi wakhe ePittsburgh ngaphambi kokuba urhwebo, oluza kuba semthethweni xa iarhente yasimahla iqala kwiveki ezayo. I-Steelers iya kuthi ifumane umjikelo wesithandathu ukubuya, Schefter uthe .
Ukugxilwa kweBhola ekhatywayo amaxabiso aneminyaka engama-31 ubudala njengokuwisa okungaphezulu komndilili, ekufuneka uncede iiKhadinali ziphucule kumdlalo wokudlala owoyikisayo. IArizona igqibe okokugqibela kwi-NFL kwi-2018 nge Iqela lama-55.8 lokuphumelela kwibakala, kunye no-r I-ookie quarterback uJosh Rosen wabanjwa amatyeli angama-45-inani lesixhenxe liphezulu ngaphandle kokuqala imidlalo eli-13. Ewe kunjalo, amarhe kunye iidrafti ezihlekisayo iiKhadinali zifika kwi-QB yeselfowuni ngakumbi ngaphandle kwe-no. 1 khetha ngo-Epreli, enokuthi inciphise ezinye zezo zinto zixhalabisayo.
IiJaguar zokuCoca iNdlu ngaphambi koTyikityo lweNick Foles
Ngomhla wesi-8, ngo-1: 00 P.M. KUNYE
UHeifetz: I-Jacksonville kulindeleke ukuba ityikitye ii-Foles xa i-arhente yasimahla iqala kwiveki ezayo, kodwa kuqala nguMarie Kondo-uludwe lwakhe lokwenza indawo efunekayo. Iqela kuthiwa liyakukhulula ukubaleka umva UCarlos Hyde , ukuzikhusela UMalik Jackson , kunye nokhuseleko UTashaun Gipson , eya kudala i-23.1 yezigidi zeedola kwigumbi.
Indlela kaHyde eya eJacksonville yayingaqhelekanga. UCleveland wamyila kumjikelo wesibini oyidrafti ka-2014, emva koko watyikitya kwakhona uHyde kwisivumelwano seminyaka emithathu ngeedola ezisi-8 eziqinisekisiweyo ngo-Matshi 2018. AbakwaBrown bamrhweba e-Jacksonville ngo-Okthobha, ixelwe kuba umququzeleli okhubekisayo u-Todd Haley wayenika ibhola ku-Hyde kakhulu kwaye ayingomjikelo wesibini wokukhetha uNick Chubb okanye uDuke Johnson. U-Hyde akakhange enze blip kwiJacksonville, kwaye ukumkhulula usindisa iiJaguars ezi- $ 4.7 yezigidi kwindawo yesikwere.
IHyde inokuba lelona gama likhulu, kodwa uJackson ngoyena mdlali ubalulekileyo. UJacksonville wamsayina kwisivumelwano seminyaka emithandathu, i-85 yezigidi zeedola kwi-2016, kodwa iqela limkhulula amaxesha amathathu kunye ne-45 yezigidi kwisivumelwano. Umgca wokuzikhusela weJaguars lelona qela libiza kakhulu kwimbali yeNFL noJackson, ukuphela kweCalais Campbell, kunye noMarcell Dareus. UDareus sele ehlelile isivumelwano sakhe neJacksonville ukuze asindise iqela le-5 yezigidi zeedola kwisithuba se-cap kulo nyaka kwaye azenzele isitshixo esiza kukhutshwa kunyaka olandelayo, esiya kusindisa i-Jacksonville $ 20 yezigidi kwisithuba se-cap. U-Gipson, ukhuseleko otyikitye isivumelwano seminyaka emihlanu, i-36 yezigidi zeedola neJacksonville ngo-2016, uya kukhululwa ahambe iminyaka emithathu kunye ne-19.3 yezigidi kuloo nto. Umntu oneminyaka engama-28 ubudala ukhuseleko lwetalente lwamva nje lokufumana iarhente yasimahla kwinto ekuthi ngequbuliso iklasi elayishiwe.
Ukudityaniswa kwezi ntshukumo kucacisa indlela yokuba iJacksonville ifumane iiFoles. Iqela beliqikelelwa ukuba linendawo encinci yebhola ekhatywayo kweli xesha lonyaka ngesiphene se- $ 12 yezigidi ngaphambi kokuqala kohambo. Ngoku iqela liqikelelwa ukuba linamalunga nezigidi ezingama-26 zegumbi, kwaye ukukhupha uBlake Bortles kungongeza nangaphezulu. RIP, uBlake; Hlala ixesha elide uNick Foles.
Izigebenga kunye neeBrown Shintsha uOlivier Vernon kunye noKevin Zeitler
Ngomhla we-8 kuMatshi 12:39 PM KUNYE
UHeifetz: Izigebenga zaseNew York zivumile ukurhweba ngokudlulisa u-Olivier Vernon kwiCleveland Browns yokulinda uKevin Zeitler, iNethiwekhi yeNFL UMike Garafolo kunye noIan Rapoport uxele uLwesihlanu.
Kukutshintsha kwabadlali ababini abanikwe izivumelwano ezinkulu ngexesha lolawulo lwe-GM lwangaphambili olwahlula i-GM yangoku, kwaye inokuba yimpumelelo kuwo omabini amacala. Owayengumphathi jikelele we Giants u-Jerry Reese watyikitya i-Vernon kwisivumelwano seminyaka emihlanu nge-52.5 yezigidi zeedola eqinisekisiweyo kwintlawulo yokugqibela yokuchitha imali ekwakheni kwakhona ukhuselo kubhabho ngo-2016. Kwakubonakala kukuqaqamba unyaka omnye, kodwa ukwenzakala kwaphazamisa umdlalo kaVernon kumaxesha amabini adlulileyo, kwaye akazange abeke ezingxoweni eziyi-8.5 okanye kulindeleke abalandeli beGiants ngexesha elithile. IVernon inetyala le- $ 15.3 yezigidi, kwaye iiGiants bezizakufumana i-15.5 yezigidi zeedola xa ihlala kwiqela. Ngokumhambisa, umphathi jikelele u-Dave Gettleman ukhethe ukuthatha i-8 yezigidi zeerandi zokufa kulo nyaka ngelixa egcina i-7.5 yezigidi zeedola. Ukutshintshiselana, iiGiants zifumana uZeitler, onokuthi ancede kwimizamo kaGettleman yokwakha kwakhona ukungcola komgca weNew York. Iqela lisayine ukuwisa ngasekhohlo uNate Solder, umlindi oyilwayo uWill Hernandez kumjikelo wesibini, kwaye warhoxa owokuqala umjikelo wokukhetha i-Ereck Flowers kunyaka ophelileyo njengenxalenye yeprojekthi, kwaye ngoku iZeitler inokuba sisiqwenga esiya kutyhala umgca weGiants ukusuka ezantsi uye ngaphezu komndilili — uphawu lokwamkela uSaquon Barkley kunye no-Eli Manning.
UZeitler, ngubani wayenqwenela usuku lokuzalwa olumnandi nguCleveland ngolwesiHlanu kungekudala ngaphambi kokuba kubikwe kurhwebo, wanikwa isivumelwano seminyaka emihlanu, i-60 yezigidi zeerandi kwi-Browns kwi-2017 eyamenza ukuba abe ngumlindi ohlawulwa kakhulu kwi-NFL ngelo xesha. Esi sivumelwano sanikezelwa nge-GM-process kunye ne-Process-truster uSashi Brown, kodwa u-GM u-John Dorsey wangoku kusenokwenzeka ukuba ufuna indawo kaZeitler aye ku-Austin Corbett, unogada ophuma kwi-Nevada i-Browns eyiliweyo nge-33rd ye-pick jikelele kunyaka ophelileyo. Uya kubiza imali encinci kula maxesha mathathu alandelayo edityaniswe kunokuba i-Zeitler izakubiza nge-Thanksgiving. AbakwaBrown bonga imali kumgca okhubekisayo, kodwa ngaphezulu kwe- $ 81 yezigidi yendawo eqikelelweyo yekepusi, kufuneka bachithe kwenye indawo ukubetha umgangatho womvuzo, ngokongeza uVernon banokunika inkwenkwezi yokupasa u-Myles Garrett no-Emmanuel Ogbah ngoncedo umgca. UVernon wayengenguye iiGiants ezilindele ukuba hayi. 1 ukudlula ngokukhawuleza, kodwa unokuba ngumphelelisi ogqibeleleyo weCleveland njengokhetho lwesibini olulungileyo.
Abadlali abali-10 abaHlawulisayo abango-2018 kwi-Arhente yasimahla ye-NFL
IiNtetho zoRhwebo zeBuffalo zikaAntonio Brown ziWela
Ngomhla wesi-8, ngo-7: 56 ekuseni ET
Isixhobo: IiBhili zeBuffalo zibonakala zikufutshane ukugqibezela urhwebo lwePittsburgh Steelers eyamkela ngokubanzi u-Antonio Brown, iNan Rapoport yeNFL yeNethiwekhi uxele ngolwesine ngokuhlwa . Kwangoko kusasa ngolwesiHlanu, nangona kunjalo, u-Adam Schefter we-ESPN uxele ukuba nayiphi na Isivumelwano esinokubakho siwile . Kungoku ngoku ngokubanzi ixelwe Uthethathethwano lwaphuka ngenxa yokuba uBrown engazukuzibophelela kwi-franchise yeBhili. Sibe neengxoxo ezakhayo, kodwa ekugqibeleni ibingavakali ngapha nangapha, utshilo umphathi jikelele weBuffalo uBrandon Beane kuSchefter. Njengomdlali obalaseleyo njengoAntonio Brown, siqhubekile kwaye kugxilwe kuthi kwi-arhente yasimahla ..
Ukuhamba bekuya kubamba isiphithiphithi ku-Brown kunye ne-Steelers. Iqela lokuqala leqela lonke i-All-Pro lacela urhwebo kule offseason emva kokungasebenzi kwiVeki yeqela le-17 kwimidlalo ye-Bengc ngokuchasene neBangali. ukuphikisana namaqabane kunye nokutsiba iindlela ezininzi phambi komdlalo. Emva kwexesha, uBrown waya esidlangalaleni ngezikhalazo zakhe ezininzi, kubandakanya nemicimbi yakhe kunye nekota yesibini uBen Roethlisberger, owathi uBrown waziva ngathi ungumnini ngenkangeleko kwii-HBO's Ivenkile kule nyanga .
UBuffalo wayenethemba lokuba ububanzi buzakuba bujojele ubomi kwityala lokufa. Imithetho esayilwayo igqibe kwindawo yesithathu kwi-AFC East ngo-2018 kwaye ibingama-31 kwiBhola ekhatywayo engaphandle ehlasela iDVOA. I-Rookie quarterback uJosh Allen ujonge njengembaleki, kodwa wagqiba nje iipesenti ezingama-52.8 zokupasa kwakhe kwiiyadi ezingama-2,074.
Okwangoku, u-Brown oneminyaka engama-30 ubudala uneminyaka emithathu eseleyo kwikhontrakthi yakhe, ekucetywa ukuba imhlawule i-38,250,000 yeedola kumvuzo nge-2021, nangona kukho into enokubakho emva kwexesha le-2020 nokuba leliphi iqela alidlalelayo. I-Steelers ihlala ikhuthazeka ukuba ithengise ngaphambi kuka-Matshi 17, xa kufanelekile ukuba ufumane i-roster yezigidi ezi-2,5 zeerandi. Uya kubala i-19 yezigidi zeedola-iyonke eseleyo yebhonasi yakhe yokutyikitya eyityikityiweyo-ngokuchasene nekepisi yasePittsburgh nokuba ukweloluhlu lweqela okanye hayi. ntsundu ikwabize isivumelwano esitsha ngemali eqinisekisiweyo ngakumbi. Emva kokuba waxelwa engathandi ukuya kwiNyathi, ixesha , nangona, akucaci ukuba imarike kuye ikhangeleka njani.
UBrown uxelwe ukuba uphantsi kophando kwi-NFL ngokubhekisele kwimpikiswano yasekhaya kaJanuwari ebandakanya umama wentombi yakhe, owaxelela amapolisa ukuba uBrown wamtyhala emva kokuba engavumi ukushiya umnyango wakhe, ngokommeli wesebe lamapolisa. udliwanondlebe ngu TMZ . (UBrown akazange abanjwe kweso siganeko kwaye wakhanyela nasiphi na isenzo esingalunganga.) UBrown ukwamangalelwa yindoda ethi uBrown waphantse wabetha unyana wale ndoda eneenyanga ezingama-22 ngefanitshala nezinto ezaphoswa nguBrown kwibhalkoni enemigangatho ye-14. , kukwaxelwe okokuqala ngu TMZ . UBrown ukwalile ukwaphula umthetho kweso siganeko.
I-saga yorhwebo echaziweyo le offseason ayikapheli.
Ukuseta iMarike yamaQela esiXhobo seAgents aBona banomdla aSimahla
Ityala Keenum Ngaba usendleleni eya eWashington
Ngomhla wesi-7, ngo-6: 20 P.M. KUNYE
UHeifetz: IWashington kunye neDenver bavumile kwiiparitha zorhwebo ngekota yekota emva kweKeyum, ngokukaMike Klis weNBC 9 News eDenver.
Klis ixelwe NgoLwesine ukuba isivumelwano siza kubandakanya ukutshintshwa kwezinto ezisikiweyo emva kwexesha kunye notshintsho oluncinci kwisivumelwano sikaKeenum.
Iibroncos zineeparitha zorhwebo kunye neWashington yeQB Case Keenum: Iibroncos zifumana i-6th ngo-2020, i-WAS ifumana iBroncos 7 kwi -20, ngomthombo ngamnye. Isivumelwano sikaKeenum saphinda sasebenza. I-Broncos ihlawula i-500K yeebhonasi yokwakha ngokutsha kwaye ihlawule i-3.5 yezigidi zeedola kumvuzo wakhe we-7M. IWashington ihlawula i $ 3.5 mi. # 9midlalo
-Mike Klis (@MikeKlis) Ngomhla wesixhenxe ku-Matshi 2019
Ke uKeenum ufumana i-bump ukusuka kwi-7 yezigidi ukuya kwi-7.5 yezigidi. I-Broncos igcina i-3 yezigidi zeedola ezisi-7 zezigidi isiqinisekiso sokuba bayamtyala, kunye nokunyuka ujikeleze. IWashington iba namava okuqala eQB ukukhuphisana noColt McCoy ngomsebenzi weQB. Yenza isivumelwano ngolwesiThathu. # 9midlalo
Kubonakala ngathi kunokwenzeka ukuba uAlex Smith uyakwenza njalo sukulungela ukudlala ekuqaleni kwe-2019, ukuba kunjalo, emva kokuqhekeka komlenze ophelileyo kwisizini ephelileyo wosuleleka emva kotyando. Umqeqeshi oyintloko waseWashington uJay Gruden uxelele oonondaba kwi-NFL ukudibanisa kwiveki ephelileyo ukuba unentembelo ekubuyeni kwikota ebuyela emva uColt McCoy, kodwa nokuba wayenemibuzo emva kokugcinwa kweqela kwiminyaka emihlanu edlulileyo naye waphula umlenze ngelixa ethatha indawo kaSmith.
Ekugqibeleni walifumana [ithuba]; Kufana nokukhupha isilwanyana kwikheyiji, iGruden uxelelwe iintatheli. Wangena ngqo eludongeni, wenzakala. Kuya kufuneka athobe isantya, inkqubo. … Wonzakele, kwaye akenzanga njalo.
UKeenum wabonwa eDenver xa iqela kuthengiswa uJoe Flacco , kwaye wayeza kukhuphisana noMcCoy ukuba abe yikota yokuqala ukuqala eWashington- enye yexesha lasemva kwexesha emva kokuba uKirk Cousins ​​emke eWashington esiya eMinnesota kwaye wafudukela eKeenum.
Akungomngcipheko omkhulu eWashington. U-Keenum uza kwenza i-3,5 yezigidi zeedola eWashington ngeli xesha lonyaka, ngokufana ne- $ 3 yezigidi iqela elihlawula uMcCoy, kwaye omabini kwikota aphelelwe yisivumelwano. (UDenver angabhatala uKeenum enye $ 3.5 yezigidi kunye nebhonasi yokwakha ngokutsha eyi- $ 500,000.) Ukuba uSmith ubuya kwakamsinya kunokuba bekulindelwe, iqela lingaphinda lithembele kuye ngo-2020. Ukuba akunjalo, iqela linokujonga ukusayina kwakhona uKeenum, okanye uKeenum Kunuka, iklasi enetalente yekota ye-2020 yekota yangasemva ijongeka ithembisa njengesihogo. Nokuba kwenzeka ntoni, siyazi into enye: Kukho ithuba uColt McCoy ongasoze ashiye indawo yomhlobo waseWashington.
I-Bears iNgxelo yokuMamela iZibonelelo zeJordani Howard
Ngomhla wesi-7, ngo-3: 07 P.M. KUNYE
Isixhobo: IChicago Bears zacelwa ngamaqela aliqela kwi-NFL ukudibanisa malunga norhwebo lokubaleka ukubuyela emva Jordan Joward, kwaye iingxoxo ziyaqhubeka, U-Adam Schefter we-ESPN uxele ngoLwesine.
Amaqela amaninzi aya kwiChicago Bears ngokudibanisa iveki ephelileyo kwaye axoxa ngorhwebo olunokubakho lweRB Jordan Howard, kwimithombo yeligi nganye. Iingxoxo ziyaqhubeka.
-Adam Schefter (@AdamSchefter) Ngomhla wesixhenxe ku-Matshi 2019
Urhwebo lunokuba sengqiqweni kwiiBhele, ezingaphumelelanga ukudibanisa ngokupheleleyo i-Pro Bowler eneminyaka engama-24 ubudala kumqeqeshi oyintloko wonyaka wokuqala kunye nomdlali obizwa ngokuba ngumdlali obizwa ngokuba nguMat Nagy. Emva kokungxama ngaphezulu kweeyadi ezili-1,100 ngo-2016 nango-2017, uWoward wayenazo nje iiyadi ezingama-935 kwii-3.7 iiyadi ngenzame yokuhamba neeyadi ezili-145 ezifumana kwizamkelo ezingama-20. Okwangoku, iqabane lakhe elingasemva u-Tarik Cohen ufumene iimbasa ze-All-Pro ubukhulu becala ngenxa yomsebenzi wakhe kumdlalo odlulayo-wabalekela iiyadi ezingama-444 kuphela kodwa wabamba iipasi ezingama-71 kwiiyadi ezingama-725.
U-Howard, omiselwe ukwenza ngaphezulu nje kwe- $ 2 yezigidi kwi-2019, uya kuba yiarhente yasimahla engathintelwanga emva kwesizini. EChicago yaxelwa Ukhetho lwesithathu lokumkhethela ngaphambi komhla wokugqibela we-2018 weqela liqela ekuzingeleni umdlalo, kodwa wenqabile nangona bengenayo eyokuqala neyesibini yomjikelo wokukhetha ngo-Epreli. U-Howard unokufumana ixabiso elifanayo kule sizini, kwaye angayenye indlela efanelekileyo kumaqela aphosiweyo kwintengiso ephezulu ebuyisa iiarhente zasimahla uLe'Veon Bell, Tevin Coleman, noJay Ajayi.
kutheni tyga idumile
Urhwebo luka-Antonio Brown Siye Sonke Silinde uMeyi ukuba abekufuphi
Matshi 6, 10:39 kusasa ET
UHeifetz: Ophumeleleyo kwi-sweepstakes yorhwebo luka-Antonio Brown kulindeleke ukuba abhengezwe ngolwesiHlanu, ngokwengxelo evela kwi-ESPN UAdam Schefter . Amaqela amathathu amatsha angenile ekuqhubeni, ngelixa iiJets kunye neeCardinal ziphumile, iNFL Network's UIan Rapoport ixelwe.
Akumangalisi ukubona iGang Green iphuma kwimbambano. IiJets zathengisa kathathu ngeenxa zonke zokukhetha ukusukela phezulu hayi. 6 kuye ku-hayi. 3 kuyilo lwe-2018 kunye nekota yekota ekhethiweyo uSam Darnold. Kusenokwenzeka ukuba babengenayo idrafti eyinkunzi yokukhuphisana nabantu abanokubanqwenela abaBrown abafana nabaRaiders, abanezinto eziphambili kwezingama-35 ezikhethiweyo kuyilo lwentwasahlobo kwaye ukhonkxiwe njengembaleki-phambili ukuhlalisa iPro Bowler izihlandlo ezisixhenxe kunye nomamkeli we-blonde-mustachioed oqinisekileyo ngalo lonke ixesha. UBrown kudala eziqhayisa ngokuba yiGruden Grinder (ewe, ndicinga ukuba), kule veki uQB uDerek Carr uxelele Inyosi yeFresno unethemba lokuba abahlaseli bangasigqiba isivumelwano.
Iikhadinali, okwangoku, zinokwenzeka uphonononge obunye ubugcisa . Ke uya kuba phi umhlaba we-AB? Kwaye ngoobani la maqela mathathu ayimfihlakalo?
Umphathi jikelele we-Steelers uKevin Colbert uxelelwe ProFootballTalk Ngempelaveki ukugqiba amandla eklasini yokuyila indibaniselwano kuya kuba yinto enkulu kwinkqubo yokwenza izigqibo. UColbert ucebise ukuba iPittsburgh ingalitshintsha ixabiso layo lokubuza ngokusekwe kuvavanyo lwethemba le-2019. Oko kunokubumba iipakeji kumaqela athile-ama-49ers? Ii-Colts? Iipakethi? -Uzimisele ukunikela.
UBrown wakhankanya kudliwanondlebe noJeff Darlington we-ESPN ukuba wayecinga ukuba uza kushukunyiswa nguSuku lwePatrick, kuba kulapho ke kufanele ukuba afumane ibhonasi yeerandi ezigidi ezingama-2.5, kwaye abakwaSteelers baya kukhetha ukuba iqela lakhe elilandelayo lihlawule elo nani. Kodwa ProFootballTalk ixelwe Kwiveki ephelileyo ukuba i-2.5 yezigidi zeedola inokuhlawulwa ngezavenge ngexesha lonyaka we-2019 kwaye nge-17 Matshi bekunganyanzelekanga ukuba ibe ngumhla obekiweyo.
Ukulandela ujikelezo lwamva nje lweengxelo, nangona kunjalo, kubonakala ngathi le saga inkulu yeBrown ingagqiba kwiiyure ezingama-48 ezizayo. Lindela iqela eliza kuvuma ukuba urhwebo lube ityhilwe kumdlalo obonisa imask NgoLwesihlanu ebusuku.
I-Baltimore Ravens Ngaba Iindlela Zokwahlukana no-Eric Weddle
Ngomhla wesihlanu ku-Matshi 5: 26 PM KUNYE
UHeifetz: I-Baltimore Ravens ikhuphe ukhuseleko u-Eric Weddle ngolwe-Lwesibini, ngokweNFL Network ye-Ian Rapoport.
Enye yeenkokeli zeqela, umfana omkhulu wegumbi lokutshixa kunye nomdlali onemveliso emangalisayo. I-stunner eBaltimore. https://t.co/Ywu2jVJjlv
-Ian Rapoport (@RapSheet) Ngomhla wesihlanu ku-Epreli 2019
Umtshato wawungena kunyaka wokugqibela weminyaka emine, ikhontrakthi yezigidi ezingama-26 zeedola awazisayina neBaltimore kwi2016 emva kokuchitha amaxesha alithoba kunye neeshaja. Ulelinye lawona mazwe akhuselekileyo kunye nelona linokuthenjwa kwiligi, kwaye nangona wayeneminyaka engama-34 ngoJanuwari, uqalile imidlalo yexesha eliqhelekileyo eli-170 kwali-176 kule minyaka ilishumi idlulileyo, kubandakanya bonke abangama-48 okoko wafika eBaltimore. Ukukhululwa kwakhe kuphawula isigqibo sokuqala esinzima esenziwe ngumphathi omtsha jikelele u-Eric DeCosta, owaba ngu-GM wesibini kwimbali yeRavens franchise xa wangena endaweni yakhe. ibali elidumileyo lika-Ozzie Newsome le offseason. Ukuhamba kukhulula i-7.5 yezigidi kwi-cap space, enokunceda iBaltimore iphinde isayine ngaphakathi kwe-backbacker CJ Mosley. I-Ravens khange ibeke ithegi ye-franchise kuMosley ngaphambi komhla wokugqibela wangoLwesibini, kodwa basenokuba nethemba lokubetha isivumelwano ngaphambi kokuba iarhente yasimahla iqale kwiveki ezayo.
Umtshato (kunye iindevu zakhe ezimangalisayo nezothusayo Lulongezo lwamva nje lokuba ngequbuliso lilayishwe liqela lokhuseleko lwearhente yasimahla. U-Seattle ka-Earl Thomas, u-Landon Collins wase-New York, u-Tyrann Mathieu wase-Arizona kunye no-Tre Boston, i-Los Angeles Rams, u-Lamarcus Joyner, u-Ha Ha Clinton-Dix wase Washington, kunye no-Kenny Vaccaro wase-Tennessee bonke bazimisele ukubetha imakethi evulekileyo. Umkhukula uza unyaka emva kwenani lamagama amakhulu asimahla kwindawo leyo babenengxaki yokufumana iikhontrakthi ezibahlawulele oko babecinga ukuba kufanelekile .
INgilani eNtsha ayizukusebenzisa iTag yeFranchise kwiiAgents ezintathu zasimahla
Ngomhla wesihlanu ku-Matshi 5:10 pm KUNYE
UHeifetz: I-New England Patriots yi-Patriots-ing. UAdam Schefter kunye neeYates zeSimu uxele oko, kuthintela naluphi na utshintsho emva kwexesha , INgilane icwangcisa ukuyeka ukuzikhusela kweTrey Flowers, ukujongana noTrent Brown, kunye nomkhabi uStephen Gostkowski hit free agency endaweni yokusebenzisa i-franchise tag kubo.
Ezi ndaba azithethi ukuba bobathathu bayashiya. U-Gostkowski, umkhabi we-New England okhe wakhangela i-2006, wayemakishwe nge-franchise kwi-2015 kwaye ekugqibeleni wasayina isivumelwano seminyaka emine, esiphela kule nyanga. U-Gostkowski uye wangcungcutheka kunendlela igama lakhe elinokubonisa ngayo, ephosa inqaku elongezelelweyo okanye injongo yasentsimini kumdlalo ngamnye wokugqibela we-Patriots 'Super Bowl. Ayizothusa into yokubona i-Patriots iphinda isayina i-Gostkowski kule veki izayo, kodwa ukuba ayenzi njalo, abo baphosakeleyo banokuba nento yokwenza nayo.
Iintyatyambo ziya kuba yilahleko enkulu. Nguye Patriot ogqibeleleyo , kodwa unokuyalela nohlobo lwenkontileka kwiarhente yasimahla iNew England enqabileyo ngokwembali ukuyitshatisa, ngakumbi xa kuthathelwa ingqalelo abapasileyo uJadeveon Clowney, uDee Ford, uDemarcus Lawrence, noFrank Clark bonke bayifumene i-franchise tag kumaqela abo. Oko kushiya iintyatyambo njengowona mdlali uphumeleleyo, kwaye apho amanye amaqela anokubona umdlali oxabisa ukuya kuthi ga kwi-50 yezigidi zeedola, i-New England inokubona umdlali abangayilungisanga. I-101 iyonke kwi-2015 njengenye enokuthi ithathelwe indawo yenye yazo ezintandathu (!) Iipokotho eziyilwayo ngaphakathi kwe-101 ephezulu kulo nyaka.
UTrent Brown uya kuba ngomnye wamawonga aphezulu akhoyo ngoku ekubeni uDonovan Smith ephinde wasayina neTampa Bay. UBrown akaphantse ahambelane neentyatyambo, kwaye akazukuba nzima kumaPatriot ukuba athathe indawo yawo (uBrown uyeke ikota yesibini yekota emva kwayo yonke i-2018, ngokwe Ukugxilwa kweBhola ekhatywayo ). UPats ufumene uBrown kwi-49ers kwisizini ephelileyo njengendawo ebiza kakhulu kaNate Solder, otyikitye neGiants kwiarhente yasimahla. Amaqela asukela umlo wasekhohlo kunokuba bubulumko ukulandela iqhinga elifanayo endaweni yokuhlawula uBrown imali enkulu.
I-Tampa Bay Icwangcisa iMakethi yokuSebenza noDonovan Smith
Ngomhla wesihlanu ku-Matshi 5:56 PM KUNYE
UHeifetz: I-Tampa Bay Buccaneers iphinde ityikitye ukujongana no-Donovan Smith kwisivumelwano seminyaka emithathu nge-27 yezigidi zeedola eziqinisekisiweyo xa zisayinwa ezinokubaluleka njenge- $ 41.3 yezigidi, i-NFL Network's UMike Garafolo uxele uMvulo.
USmith wayilwa i-34th iyonke kwi-2015 kwaye uyiqale yonke imidlalo ukusukela oko wangena kwiligi. Kwimiba engama-49 eyadlala ama-800 okanye ngaphezulu ngo-2018, uSmith wahlanjwa ngo-32 Ukugxilwa kweBhola ekhatywayo kukhuseleko lokudlula kwaye wavumela uxinzelelo lwesine kwelona qela. Akangomdlali we-elite, kodwa uhlala ebaleni kwaye uyasebenza, okwaneleyo ukuhlawulwa ukuvimba ngaphandle. I-Buccaneers iyalutshintsha ulwaphulo-mthetho lwayo kunye nomqeqeshi oyintloko uBruce Arians othatha indawo kunye nomququzeleli okhubekisayo (kunye Ingqungquthela yeGrit U-Byron Leftwich ecaleni. Iziphoso zeArians ngokwesiko zijolise kubamkeli nzulu kwezantsi komhlaba, efuna ukhuseleko lokupasa ukunika ikota yasemva kwexesha ixesha elaneleyo epokothweni yemidlalo yokuphuhlisa.
Emva kukaDonovan Smith nosapho lwakhe, oyena mntu wonwabe kakhulu kukuva ezi ndaba inokuba nguMaami Dolphins osisithethi simahla uJa'Wuan James, oya kuba ngowona mlo mhle kwiarhente yasimahla. UJames khange adlale njengabadlali abaphezulu, kodwa angaba semgceni wokufumana ikhontrakthi enkulu kwiqela elikhuselekileyo-elikhuselayo. (UNate Solder, umzekelo, ufike kwisivumelwano seminyaka emihlanu ene- $ 34.8 yezigidi eziqinisekiswe kwiiGiants offseason yokugqibela.) Emva koJames, awona maqhinga mabalaseleyo ashiyekileyo nguTrent Brown wase-New England kwaye, uninzi lwabafana mhlawumbi awufuni njengokuyalela ngasekhohlo ngaphandle kwamanani.
IiNkosi kuthiwa zichwechwa nguDee Ford, kodwa zinokuMrhweba
Ngomhla we-4 kuMatshi, ngo-7: 35 P.M. KUNYE
UHeifetz: IiNkosi zaseKansas City ziya kusebenzisa ithegi ye-franchise ku-Dee Ford, UDan Graziano we-ESPN uxele ngoMvulo.
Ixabiso le-franchise-tag ye-backbacker yangaphandle kulo nyaka yi- $ 15.4 yezigidi. Ngokungafaniyo nabanye abakhuseli abanetalente ekuthiwa bamakwe ngoMvulo-uJadeveon Clowney, uDemarcus Lawrence, uFrank Clark, noGrady Jarrett- kukho ithuba elibi lokuba iFord ingathengiswa kunokuba ilungele iChiefs kunyaka olandelayo, njengoko uAdam Schefter we-ESPN uxele ngoMgqibelo.
IiChiefs zibeka ithegi yazo kwiLB Dee Ford namhlanje kwaye ziceba ukudlala naye kule sizini, kodwa ngotshintsho kwisikimu sokuzikhusela se-4-3, baya kumamela izibonelelo zorhwebo zomdlali wabo ovunyiweyo, kwimithombo yeligi nganye.
-Adam Schefter (@AdamSchefter) Ngomhla wesi-2 ku-Matshi 2019
Inethiwekhi ye-NFL u-Ian Rapoport uqinisekisile ngoMvulo ukuba urhwebo lweFord lwalusenokwenzeka.
Kufuneka kubekho intengiso yorhwebo apha, njengoko #Izifundo zivulekile ukujongana naye kwiqela elinezikimu ezingcono ezifanelekileyo ngexabiso elifanelekileyo https://t.co/29LKVfMdqG
-Ian Rapoport (@RapSheet) Ngomhla wesi-4 ku-Matshi 2019
Ukuzikhusela kweSixeko saseKansas kunikezele ngeeyadi zokugqibela ezipasayo kwiligi kwisizini ephelileyo, kodwa oko kunokuba netyala kakhulu. Ukhuselo lweChiefs luthathe intsimi ngokukhokelela kumanqaku ayi-8.13 ngokomndilili, awona manqaku aphezulu kwiligi, kwaye amaqela ahlala eshiya isicwangciso somdlalo wabo kwaye aqala ukudlula kwangoko kunesiqhelo ukuzama ukwenza ukusilela. Oko kungabonakala kuyimpikiswano ngokugcina ipasher yesibini yabo ininzi, kodwa kukwakho nengxoxo yokuthengisa phezulu kwiFord. Wayenengxowa ephezulu ye-13 yomsebenzi ngexesha apho wayenokukhawulezisa umntu odlulayo ngaphandle kokukhathazeka ngokumisa i-run ngenxa yamanqaku. Kodwa ukuqokelela iingxowa ezili-13 zeChiefs zango-2018 kungalingana nebhola ekhatywayo yokuba sisiqalo sesihlanu seWarriors: Abadlali abaninzi banokukwazi ukubeka amanani afanayo kwimeko efanelekileyo.
Kodwa iqela lisenokufumana isaphulelo kwiinkonzo zikaFord. Ixabiso le-franchise-tag yokuphelisa isiphelo kulo nyaka yi- $ 17.1 yezigidi, kodwa iFord yamakishwa njenge-backbacker yangaphandle, eyayiza kumhlawula i-15.4 yezigidi zeedola ngo-2019 ngaphandle koxanduva olufanayo. Kukho ithuba Ford unokuphikisana nesikhundla sakhe kwaye afune umahluko osisi-2 sezigidi zeedola. (Iitekans zisombulule inyathelo elinye elinokubakho noJadeveon Clowney ngokunika ibhonasi ye- $ 1 yezigidi ekupheleni kuka-2018.)
Ngotshintsho lweeNkosi ziye kwisiseko sokhuselo esise-4-3 phantsi komququzeleli omtsha uSteve Spagnuolo, othathe indawo yomlungelelanisi okhuselayo ixesha elide uBob Sutton ngoFebruwari, akucaci nokuba iFord izakulunga na, kwaye kukho ithuba lokuba ibambe umbane kwibhotile ngo-2018. Inqaku lokuba uPatrick Mahomes II kunye noTyreek Hill bonke basasebenza kwizivumelwano zabo kwaye banokuyalela irekhodi lesivumelwano kwisikhundla sabo ngasinye kungekudala, kwaye kulula ukubona ukuba kutheni iiNkosi zithandabuza ukwenza ixesha elide.
Amahemuhemu orhwebo eFord eza emva kweKansas City kuthiwa ubuyothenga umntu odlulayo rusher Justin Houston. IHouston ikhokele iligi ngeengxowa ezingama-22 ngo-2014 kodwa ineengxowa ezingama-30 kuphela kumaxesha amane okoko ukusukela, njengoko yayisokola ukubuyela ngokupheleleyo ekulimaleni kwedolo ngo-2015. Xa usempilweni, iHouston isesesemagqabini (ukuba akusekho bantu banobuchule) idlula ngokukhawuleza, kodwa i-cap yayo eyi-21.1 yezigidi zeerandi kule sizini yenza ukuba kube nzima eKansas City ukuyigcina. NgoMvulo, Matt Verderame Umxhasi uxele ukuba iiNkosi ziyamkhulula uHouston, kodwa iNethiwekhi yeNFL uTom Pelissero ixelwe Kwakungekho njalo-ubuncinci, okwangoku. Ukukhulula iHouston kungasindisa iiNtloko zeedola ezili-14 zeedola kwisithuba se-cap. Ukuba iqela lahlulelene neHouston, kunokuba bubulumko ukubambelela kwiFord ukugcina ubuncinci bokukhawuleza kokugcina ukuzikhusela kuhloniphekile. Ukuba iiNkosi ziphela ngokuthengisa iFord kwaye zikhulule iHouston kwisizini efanayo, mhlawumbi banamehlo kwelinye labapasileyo abaninzi kuyilo lwalo nyaka lweNFL njengotshintsho- okanye bacinge ukuba banokufumana amanqaku amaninzi ngo-2019 ngekhe umba.
U-Landon Collins uxelwe ukuba ubenguMmeli wasimahla kuba uDave Gettleman Uyithiyile i-Tag Franchise
UHeifetz: Izigebenga zaseNew York azilindelwanga ukuba zifake i-Landon Collins kwaye ziya kumvumela ukuba abe yiarhente yasimahla, iNethiwekhi yeNFL uKimberly Jones kunye no-Ian Rapoport uxele ngoMvulo.
Ukujika okumangalisayo kweziganeko zikaLandon Collins, owayesakuba kukhuseleko lwe-All-Pro kunye nenkokeli yeqela. https://t.co/rIHtRxSiZn
-Kimberly Jones (@KimJonesSports) Ngomhla wesi-4 ku-Matshi 2019
Umphathi jikelele we-Giants uDave Gettleman, owayeqeshwe ngexesha lokugqibela lonyaka, wathi kwinkomfa yoonondaba kwiveki ephelileyo ukuba ukusebenzisa i-franchise tag kuya kuba yintloko.
Ke masiye kwincoko yokuphelisa iziphazamiso, Gettleman utshilo . Umaka umfana. Uyaphambana. Kwaye yile nto nonke eniza kubhala ngayo. Kwiinyanga ezintandathu, kuya kuba njalo. Ke kufuneka ndizixelele, 'Ngaba kufanelekile?'
Kuya kumangalisa ukuba izigebenga zingazami ukugcina iiCollins kuthathelwa ingqalelo ukuba sele zihambile zisuka kudlula u-Olivier Vernon. Ukukhupha i-Vernon kuyakwenza i-11.5 yezigidi zeedola kwisithuba se-cap esiya kuthi sigubungele yonke i-Collins's $ 11.3 yezigidi zexabiso ngo-2019. Kuyothusa kakhulu xa kuthathelwa ingqalelo iqela elirhweba ukhetho lomjikelo wesine kwiiRams kwisizini ephelileyo ka-Alec Ogletree, onomvuzo wesithathu ophakathi ($ 10.7 yezigidi) kwi-NFL ye-backbackers yangaphakathi, kodwa yayingu-81st kumgangatho ophakamileyo we-linebacker yiPro Soccer Focus.
Ukuba uCollins uyemka, ekuphela komdlali owabhalwa ziiGiants phakathi konyaka ka-2011 nowama-2015 okwelo qela yayizakuba ngu-Odell Beckham Jr.Izigebenga zathengisa zaya kukhetho lokuqala kumjikelo wesibini ngo-2015 ukuyila uCollins, intshatsheli yelizwe phantsi kukaNick Saban e IAlabama. UCollins woyise inkxalabo yangaphambi kokuyilwa malunga nezakhono zakhe zokugubungela ukuba abe liqela lokuqala I-All-Pro kunye noMdlali oKhuselayo woMgqatswa woNyaka kwi-2016. Kwi-2018, ixesha lokuqala likaPat Shurmur njengomqeqeshi oyintloko weeGiants, uCollins wabizwa njengokapteni weqela.
U-Gettleman wothuse ilizwe lebhola ekhatywayo njenge-GM ye-Panther ngo-2016, xa warhoxisa ithegi ye-franchise ye-cornerback uJosh Norman, iqela lokuqala elilawulayo i-All-Pro. Xa uGettleman wagxothwa kwii-Panther ngo-2017, uninzi lwabadlali be-Panther bangaphambili wonwabile ukuya ukubamba kwingcwaba lakhe kwimidiya yoluntu.
I-rico ehlawulwe ngokupheleleyo
Ngokumakisha uFrank Clark, iiSeahawks ziJolise ekugcineni i-D-line yazo ihambile
Ngomhla we-4 ku-Matshi 6 PM KUNYE
UHeifetz: I-Seahawks ine-franchise-tagged ukuzikhusela isiphelo sikaFrank Clark, Imidlalo eboniswe ’S UAlbert Breer uxele ngoMvulo.
UClark kunye ne-Seahawks baya kuba ne-15 kaJulayi ukufikelela kwisivumelwano sexesha elide okanye kungenjalo uClark uzakudlala phantsi kwexabiso le-17.1 yezigidi zexabiso lethegi yokuphela kokuzikhusela kwi-2019. Loo mvuzo wonyaka omnye uya kuba ngaphezulu kokuphindwe kane njengoko uClark enze kwikhondo lakhe lomsebenzi ukuya kumhla . UClark une Inani elifanayo le-quarterback hits ukusukela ngo-2016 NjengoKhalil Mack, owabizwa njengoMdlali oKhuselayo woNyaka kwaye wasayina ikhontrakthi enkulu kwimbali yeNFL yomkhuseli kweso sithuba. UClark uza ngonyaka wokuziphilisa eneengxowa ezili-13, ukubetha kwekota engama-27, kunye neempazamo ezintathu ezinyanzelekileyo.
Ngo-Earl Thomas ebekelwe ukuba ashiye i-arhente yasimahla, uClark kunye nomgcini webala uBobby Wagner ngabakhuseli ii-Seahawks zibala kulo nyaka. Iingxowa ze-Clark ze-13 zikhokele iqela, kwaye ngelixa uJarran Reed engumdlali othembisayo owayeneengxowa ze-10.5 kwi-2018, ayikho enye i-Seahawk eyayingaphezulu kwesithathu. Iqela lathengisa isiphelo sokuzikhusela uMichael Bennett kwi-Eagles kwi-offseason yokugqibela, kwaye kwiveki ephelileyo, iqela kukhutshwa I-2017 yesibini yokujikeleza uyilo olukhuselayo u-Malik McDowell, owonzakele kakhulu kwingozi ye-ATV ngaphambi kwexesha lakhe le-rookie kwaye akazange alidlalele iqela. Ngokugcina uClark, uSeattle uqinisekisa ukuba uya kuba nokudlula ngokufanelekileyo ngo-2019.
UClark wayilwa nguSeattle kumjikelo wesibini (no. 63 xa iyonke) ngo-2015. Wayegqalwa njengetalente yomjikelo wokuqala, kodwa wawa ngexesha loyilo ngokuyinxenye isiganeko sango-2014 ehotele Wayetyholwa ngenqanaba lokuqala lokungaziphathi kakuhle kubundlobongela basekhaya. Leyo ntlawulo yachithwa xa uClark bafikelele kwisivumelwano sesicelo oko kwamvumela ukuba avume ityala lokungaziphathi kakuhle.
I-Falcons Tag Jarrett kwaye inokujongana nezigqibo ezingakumbi zekontrakthi ku-D
UHeifetz: Iifalcons zine-franchise-tagged tackle Grady Jarrett, yeNFL Network's UTom Pelissero uxele ngoMvulo.
UJarrett wayenethuba elincinci lokufikelela kwi-arhente yasimahla emva kokuvela njengelinye lawona malungu abalaseleyo- kunye nabona bantu bangaxatyiswanga. Kuthathwe kumjikelo wesihlanu kuyilo luka-2015, wabopha isikhuseli sangaphakathi esikwinqanaba eliphezulu kwi-2018, ngokwe-Pro Soccer Focus. Umphathi Jikelele uThomas Dimitroff uyithethile le offseason ukuba yi kuqala Ukutyikitya umphathi weqela kwisivumelwano sexesha elide. Ithenda ye-2019 ye-franchise yendlela zokuzikhusela kulindeleke ukuba ingene kwi-15.2 yezigidi zeedola.
IAtlanta inabadlali abaninzi abancinci, abanetalente abakhuselayo abazakufuna iimvumelwano ezinkulu kungekudala, kubandakanya ne-linebackers uDeion Jones kunye no-De'Vondre Campbell kunye nokhuseleko uKeanu Neal (ngokunokwenzeka esinye sezizathu zokuba iqela kulindeleke ukuba libuyele kuTevin Coleman aye kwiarhente yasimahla) . Iqela lixoxisana noJarrett ukugcina indawo yaseGeorgia edolophini-kunye nokubeka umzekelo kubo bonke abadlali babo beengxoxo.
ICowboys icwangciswe njengesiCwangciso sikaTag Demarcus Lawrence
Ngomhla we-4 ku-Matshi 5 PM KUNYE
Isixhobo: I-Dallas Cowboys iceba ukusebenzisa i-tag yabo ye-franchise kwisiphelo sokuzikhusela Demarcus Lawrence, Inethiwekhi ye-NFL Ian Rapoport uxele ngoMvulo .
Iindaba ziza kusuku olunye ngaphambi komhla wokugqibela wokuba amaqela asebenzise iithegi zawo. Oku kungaphawula unyaka wesibini olandelelanayo iiCowboys zimakishe uLawrence, oko kuthetha ukuba uya kuba semgceni wokwenza i-20.5 yezigidi zeedola kwisizini ye-2019. Iqela liza kuba ne-15 kaJulayi yokuxoxa ngesivumelwano sexesha elide noLawrence. Ngelixa i-Dallas COO uStephen Jones yatsho iveki ephelileyo ukuba uqinisekile ukuba la macala mabini azakufikelela kwisivumelwano kwisivumelwano seminyaka emininzi, Inkqubo ye- Imbaleki ’S UCalvin Watkins baxela ukuba bakude kakhulu NgoMvulo.
U-Lawrence, umjikelo wesibini okhethwe yiCowboys kwi-2014, wakhokelela ekuzikhuseleni kwakhona eDallas ngeengxowa ezili-10.5 ngo-2018. Uyiphatha njani ikhontrakthi yakhe esinye sezigqibo eziphambili Iqela kungafuneka lenze eli xesha lokuphumla, njengekota yekota uDak Prescott, obuyela umva kuEzekiel Elliott, kunye nomamkeli ngokubanzi u-Amari Cooper bonke bazimisele ukudlala kwizivumelwano eziphela emva kweli xesha lizayo.
I-Texans Hit Jadeveon Clowney ene-Franchise Tag
Ngomhla wesi-4, ngo-2: 28 P.M. KUNYE
UHeifetz: I-Houston Texans ibeke ithegi ye-franchise ngaphandle kwe-backbacker uJadeveon Clowney ngoMvulo.
IiHouston Texans zibeke isikhundla sokungakhethi bodwa kwi-DE / OLB uJadeveon Clowney, iqela libhengeze namhlanje. pic.twitter.com/HmY04QtzWj
-I-Texans PR (@TexansPR) Ngomhla wesi-4 ku-Matshi 2019
Amacala amabini aya kuba ne-15 kaJulayi ukuba asebenze isivumelwano sexesha elide. Ukuba isivumelwano asikafikelelwa ngelo xesha, uClowney uya kutyikitya ithenda ye-franchise kwaye adlale kwisivumelwano esiqinisekisiweyo sonyaka omnye Ngo-2019 . Ithenda ye-franchise ye-linebackers isethwe kwi-15.4 yezigidi zeedola, nangona uClowney Ingxelo iya kwenza ngaphezulu kancinci . (Unokukhetha ukungasayini ithenda, kwiLe Le'Veon Bell, kodwa ngokuqinisekileyo ngekhe ahambe ngaloo ndlela.) IiThe Texans zibeka ithegi engabalulekanga kuClowney, oko kuthetha ukuba angatyikitya unikezelo lwexesha elide nomnye Iqela kunye neeTeans ziya kuba nelungelo lokutshatisa. Ukuba ii-Texans bezinokwala ukuthelekisa isithembiso esivela kwelinye iqela, bebeya kufumana iipokotho ezimbini zokuqala eziyilwayo njengembuyekezo. Akunakulindeleka ukuba elinye iqela liza kwahlukana nabadlali ababini bokuqala ukusayina uClowney kwisivumelwano esikhulu; Iibhere zanikela ngee-rounders ezimbini zokuqala zikaKhalil Mack (owahamba amabala amane emva kukaClowney kuyilo lwango-2014) kurhwebo lwesiNtu kwinyanga ephelileyo ngo-Septemba phambi kokuba amtyikitye Ukwandiswa kwezigidi ezili-141 .
UClowney ebengumkhuseli owomeleleyo eHouston kodwa usilele kulindelo olonakalisayo awangena kulo kwiligi emva kokuba engayilwanga. 1 iyonke ngo-2014 ephuma eSouth Carolina. Akazange abe nangaphezulu kweengxowa ze-9.5 okanye anyanzelwe ngaphezulu kweempazamo ezimbini ngexesha lonyaka. UClowney wadlala kwimidlalo eyi-17 yama-33 kwiminyaka emibini yokuqala yobomi bakhe (kubandakanya ne-playoffs) kodwa walungela imidlalo engama-48 kwengama-51 enokubakho kumaxesha amathathu edluleyo.
Yonke into ekufuneka uyazi malunga nokudityaniswa kweNFL ka-2019
UKyler Murray-to-the-Cardinal Ubushushu
Ngomhla we-4 kuMatshi, ngo-1: 34 P.M. KUNYE
UHeifetz: Ithemba leeKhadinali zaseArizona ezikhetha ikota yekota ye-Oklahoma uKyler Murray nge-no. 1 khetha ifumene umphunga kumdibaniso weNFL. NgoMgqibelo, iNethiwekhi yeNFL uKimberly Jones uxele ukuba amaqela akholelwa phantse kwindalo iphela ukuba iArizona iya kuyila uMurray hayi. 1. Umphathi jikelele ongenagama uxelele uMike Sando we-ESPN IArizona izakuthatha uMurray hayi. 1. Andibhejeli. Ndiyakuxelela, izakwenzeka. Umqeqeshi omtsha weCardinals uKliff Kingsbury uyayithanda umdlalo kaMurray, kodwa ngaba oko kuthetha ukuba iqela lilungiselela ukudlulela kuJosh Rosen, ekhethwe liqela nge-10th iyonke ekukhethweni kwonyaka ophelileyo? Iikhadinali GM Steve Keim khange abethe ngqo ukuqikelela ngekamva likaRosen kwinkomfa yakhe yeendaba kwiveki ephelileyo. Xa ebuzwa ukuba uRosen wayeyikota yekota yaseArizona, uKeim waphendula, ngoku, ngokuqinisekileyo.
Ukunyuka kukaMurray ukusuka kwibhola ye-baseball ukuya kwi-NFL yoyilo lokufuna ukwazi ukuba kunokwenzeka hayi. 1 ukukhetha kwenzeka ngokukhawuleza. Imilinganiselo yakhe yokudibanisa yasusa amanye amathandabuzo malunga nesiqu sakhe, kwaye wachukumisa ngexesha lodliwanondlebe. I-Heisman Trophy iphumelele kulindeleke ukuba ithathe inxaxheba kuqeqesho olupheleleyo e-Oklahoma's pro day ka-Matshi 13. Ukuba iiKhadinali bajonge ukurhweba iRosen, iWashington iya kuba nengqiqo njengendawo ekuyiwa kuyo. Akucaci ukuba u-Alex Smith uzakufumaneka ngo-2019 emva kokukhathazwa ngumlenze kunyaka ophelileyo, kwaye, nokuba usempilweni, uzakuba nama-35 ngeli xesha lonyaka.
Andiqondi ukuba iyimfihlo yokuba kukho abadlali ababonelelwa ngorhwebo oluvela kwamanye amaqela, umongameli waseWashington uBruce Allen uxelele iintatheli ULwesihlanu. Simamele loo nto.
URosen mncinci, othembisayo kwikota yangasemva onokufumaneka ngesaphulelo, yiyo yonke into iWashington enokuyicela ngenxa yemeko yayo. UPeter King uxele uMvulo ukuba iKhadinali ayinakufumana ngaphezulu kokubuyisa umjikelo wesithathu ukubuyisa iRosen, nangona ngokuqinisekileyo bebeza kufuna (kwaye bafumane) ixabiso elingcono kunelo lonyaka emva kokuyeka umjikelo wesithathu nowesihlanu ukunyusa isihlanu amabala okuyila iRosen. Kungenzeka ukuba iArizona ibangele ezi ngxelo kuba ifuna ukurhweba ukusuka ku-no. 1 kwaye unyuse ixabiso lamaqela anomdla kuMurray. Kwakhona kunokwenzeka ukuba ikhubeke ngokungalindelekanga kwi-quarterback yayo ye-franchise kunye neRosen ngumonakalo wesibambiso.
I-Nick Foles ibonakala njenge-Jacksonville-Bound
Ngomhla we-3 kuMatshi, ngo-10: 09 P.M. KUNYE
Isixhobo: I-Super Bowl LII MVP yeNick Foles kulindeleke ukuba isayine neJacksonville Jaguars nje ukuba iarhente yasimahla iqale, Umntu obuzayo ePhiladelphia Kubikwe iCawe.
Ngaphandle kokucinga ukuba amaqela anjengeWashington neMiami anokuba nomdla kwikota yonyaka eyi-30, iJacksonville ibonakala njengelona qela lilwela iinkonzo zakhe, yatsho ingxelo. Iinkcukacha zekhontrakthi zisasetyenzwa, kodwa ayinakwenza ukuba iFoles ibe lelinye lamacwecwe atyebileyo kwiligi, njengoko ukunqongophala kwamaqela asweleyo eQB kuye kwathetha ukuba intengiso kusafuneka imenzele ngokupheleleyo.
EJacksonville, uFoles uzakudibana nomlungelelanisi okhubekisayo uJohn DeFilippo, owayengumqeqeshi wekota yekhozi ngexesha lomdlalo wakhe wokudlala owawusenziwa kumaxesha amabini adlulileyo. Ukucinga ukuba isivumelwano senziwe, iJacksonville iya kuba nethemba lokuphucuka okukhulu kunyaka ophelileyo odanisayo. IiJaguar zihambe ngo-5-11 ngo-2018 kunyaka nje omnye emva kokwenza umdlalo wobuntshatsheli we-AFC. Ukhuselo oluqinise ukubaleka lusahleli lungaqinanga, kodwa uBlake Bortles kunye netyala lahlehla ngamandla kulo nyaka uphelileyo, bewisa ukusuka kwi-16th ukuya kwi-30 kwindawo yeBhola ekhatywayo yaBangaphandle . I-Bortles, ukhetho lwesithathu ngokubanzi ngo-2014, lwalubekwe ibhentshi kabini kunyaka ophelileyo kuCody Kessler. Ukungena kweli xesha lesiphelo, kungazange kubonwe njengesiqalo esisebenzayo seJaguars, sibenza indawo efanelekileyo yokuya kwi-Eagle yangaphambili.
UFoles, owaqala umsebenzi wakhe ePhiladelphia ngo-2012 kwaye wachitha ixesha neeRams kunye neeNkosi ngaphambi kokuba abuyele kwi-Eagles njenge-backup ngo-2017, waba ngummeli wasimahla xa engavumi ukusebenzisa i-20 yezigidi zeedola. Ngelixa abanye babelindele ukuba ii-Eagles zenze i-franchise-tag Foles ngethemba lokumthengisa, u-Howie Roseman uthe kwiveki ephelileyo iqela alizukuvuma.
UFoles ushiya iEagles emva kokutshintsha iQB Carson Wentz ngenxalenye ebalulekileyo yamaxesha amabini adlulileyo, ebakhokelela kwimidlalo yokudlala ixesha ngalinye. Ukongeza ekuncedeni i-franchise iphumelele isihloko sayo sokuqala se-Super Bowl ngoFebruwari 2018, wakhokela ii-Eagles kweli xesha lonyaka liphelileyo kumjikelo wokwahlulahlula, apho bawela khona kwabaNgcwele. Uya kukhunjulwa kakhulu kumdlalo wePhilly Special, ophefumlelweyo umfanekiso oqingqiweyo ongaphandle kweLincoln Financial Field kwaye iiTattoos ezininzi .
Yintoni esifanele siyijonge kwiiveki ezizayo?
UHeifetz: I-Pittsburgh Steelers kuphela kweqela elithwala ubunzima balo ngomdlalo weqonga. Ukuba bekungekho ngenxa kaLe'Veon Bell onxanelwe amaqela ukuba amtyikitye kunye neemfuno zorhwebo zika-Antonio Brown, ngesichithe uFebruwari simamele uStephen A. Smith ekhwaza ukuba uKyler Murray nguJordyn Woods, i-Arizona Cardinals nguTristan Thompson, noJosh Rosen malunga nokuba nguKhloé Kardashian. (Ngokwenyani, ndingathanda ukuva uStephen A. ethetha ngale nto.)
IGronk, iLe'Veon Bell, kunye neMigca yeBali emikhulu yeNFL Offseason
UFebruwari yayingumboniso weqela elinye, kodwa uMatshi kufanele ukuba abe ngumdlalo weqonga. Ikepu yomvuzo ka-2019 kuqikelelwa ukuba iza neentloni ze- $ 190 yezigidi, elona nani liphezulu. I-Indianapolis eqikelelweyo indawo ye-cap space kule offseason ($ 106 yezigidi) iphezulu kunenani elipheleleyo lomvuzo xa iqela laphumelela iSuper Bowl emva kwexesha lonyaka ka-2006 ($ 102 yezigidi). Iqela ngalinye linemali eninzi yokudlala elinokuthi lenze ukuba naluphi na utyikityo okanye urhwebo lunokwenzeka, nokuba imeko yabo yentloko ingabonakala inzima kangakanani. Emva koko, abaphathi ngokubanzi kunye nabaqeqeshi abajikeleze iligi bazimisele ngakumbi ukungcakaza kwimarike yorhwebo. Yongeza ezo zinto zibini ngokudibeneyo- ukuguquguquka kunye nokuthatha umngcipheko- kunye ne-NFL offseason ivuleke njengangaphambili. Gcina oko engqondweni ngala mabali aphezulu ukuba ubukele kwiiveki ezimbalwa ezizayo.
Ngaba u-Antonio Brown uza kuthengiswa? UAntonio Brown ukwenze kwacaca ukuba ufuna ukudlala kwenye indawo. Umphathi jikelele we-Steelers uKevin Colbert khange ikhuphe nomthetho Ukurhweba uBrown ngaphakathi kwesahlulo ukuba ibisesona sipho silungileyo kwitafile.
Uya kuyisayina iphi iLe'Veon Bell? UBell uphulukane ne-14.5 yezigidi zeedola ngokwala ukudlala kwithegi ye-franchise kunyaka wesibini ngokulandelelana kwaye uhleli ngaphandle kwexesha le-2018. Kodwa uthintele elinye ixesha lokuchukumisa elingama-400 kwaye waqinisekisa ukuba uyakuba sempilweni kwiarhente yasimahla. Ngoku siyabona ukuba bekufanelekile kuyo yonke le nkathazo-kwaye ngolangazelelo silindele u-Yehova ukukhutshwa kwecwecwe lakhe lakutshanje .
Ziya kuwa njani ezinye iidomino zearhente yasimahla? Ngobomi bokwenyani bukaPhilly, iiFoles, ekubonakala ukuba zimiselwe ukuya eJacksonville, ingqwalaselo iya kujikela kwiklasi iphela yalo nyaka, ebandakanya ukuzikhusela kuNdamukong Suh, ukhuseleko u-Earl Thomas, ukhuseleko uTyrann Mathieu, ukubuyela emva kukaMark Ingram, owamkela iGolden Tate , umgca-mva u-Anthony Barr, obalekela emva u-Tevin Coleman, odlulise u-rusher Terrell Suggs, odlulise u-rusher Clay Matthews, owamkela u-Randall Cobb, u-receiver u-Michael Crabtree, kunye no-Adrian Peterson.
Ngaba uRob Gronkowski uza kuthatha umhlalaphantsi? Igosa likaGronk, uDrew Rosenhaus, uxelelwe I-ESPN ngoFebruwari 19 ukuba isigqibo sikaGronk sinokuza kwiiveki ezimbalwa ezizayo, nangona uGronk kubonakala ngathi uphila ngokweshedyuli yakhe. Ungomnye wabadlali abambalwa beNFL esinokubathemba ukuba baya kuhlala kwiifidi zethu emva kokuba eyekile ukudlala.
Ngubani oza kutyikitya ulwandiso lwekhontrakthi? URussell Wilson, uDak Prescott, kunye no-AJ. Oluhlaza lonke luya kuba ziiarhente zasimahla ezingathintelwanga emva kwexesha le-2019 kwaye zinokuba semgceni wolwandiso lweekhontrakthi ezinkulu kunye namaqela abo. Ukupasa i-rusher uJadeveon Clowney, u-Demarcus Lawrence, kunye no-Dee Ford banokuthi bathengiswe nge-franchise, kwaye banokutyikitya isivumelwano esikhulu kunye namaqela abo kwiinyanga ezizayo.
Ngaba siya kuba nalo naluphi na utshintsho olukhulu lomthetho? Ngaphandle kokungenelela kwabangcwele kumdlalo wobuntshatsheli we-NFC, abanini akunakwenzeka ukutshintsha imigaqo yokudlala kwakhona. Kodwa emva kokuba iChiefs ilahlekelwe ngumdlalo wobuntshatsheli we-AFC xa bengakhange bayifumane ibhola ngexesha elongezelelekileyo, ilungelo lokuvota liya kuthi izibonelelo isilungiso ekunikezeleni amaqela omabini ilifa kwi-OT.
Kwaye ngelixa silinde le migca yamabali ukuba ivele, nantsi eminye imihla ephambili ekufuneka siyikhumbule:
NgoLwesibini, Matshi 5: Umhla wokugqibela wamaqela kubadlali bethegi yokuthengisa amalungelo.
NgoMvulo, Matshi 11: Amaqela anokuxoxisana neearhente zasimahla, kodwa angazisayini ngokusemthethweni ngexesha elibiziweyo ukuphazanyiswa komthetho .
NgoLwesithathu, Matshi 13: Unyaka omtsha weligi uqala ngokusesikweni ngentsimbi yesi-4. ET. Iiarhente zasimahla zinokusayinwa kwaye urhwebo, njengaleyo kaJoe Flacco ukuya kwiDenver Broncos yomjikelo wesine, zilungiswa ngokusemthethweni.
Lwesine, Epreli 25 – NgoMgqibelo, Epreli 27: Uyilo lweNFL lwenzeka eNashville, eTennessee.
Iziteketiso zabaqhubi beenqwelo moya eziphezulu
dink kunye nedunk aaron
Ugqirha carter lil wayne
iimfazwe zekamva zeemfazwe bhanyabhanya
Imiboniso bhanyabhanya yokwenene yaseJapan